IZITAYILE ZEKHABHINETHI YASEKHITSHINI (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Izitayile zeKhabhinethi yaseKhitshini (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela kwisitayile sekhitshi yasekhitshini kubandakanya iintlobo zekhabhathi, iingcango kunye nokugqitywa.
Alithandabuzeki elokuba eyona nto iphambili ekhitshini ziikhabhathi zekhitshi. Iqukethe ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 zoyilo kwaye yinto yokuqala oyibonayo xa ungena ekhitshini. Zisebenza njengeendawo ezijolise kakhulu kwisithuba, ngelixa zisebenza izibonelelo zokusebenza ngokugcina kunye nocwangco.Ukukhetha iikhabhathi zasekhitshini kuyakuchaza kakhulu ukubonakala ngokubanzi kunye nesitayile sekhitshi lakho, ngelixa ulinika uphawu olwahlukileyo.
Iikhabhathi ozikhethele ikhaya lakho ziphucula i-aesthetics ebonakalayo, iseta imood kwaye yongeza ukuhonjiswa kwindawo yasekhitshini. Ikhabhinethi iyakuchaphazela ubume bendawo, ukufikeleleka, ukunceda, ukusebenza kakuhle kokuhamba komsebenzi, amandla okugcina kunye nobude bekhitshi. Njengoko sibona, uninzi lwezinto ezibangela ukusebenza kwekhitshi zixhomekeke kakhulu kwiikhabhathi zasekhitshini.
Ngale nto, kubalulekile ukuthatha ixesha ukwazi zonke iindlela ezinokubakho kuyilo lwekhabhathi yekhitshi, isitayile kunye nezinto eziphathekayo. Iimarike zisinika ukhetho oluninzi kwikhabhathi yekhitshi, kwaye ukukhetha efanelekileyo ukuze ilungele ikhaya lakho kunokudideka. Kodwa xa unolwazi oluncinci malunga nezinto ezisisiseko kwikhabhinethi yasekhitshini, unokwenza ngokulula uyilo olumangalisayo lwekhitshi elilolo hlobo ngokwenene. Sijoyine njengoko sivavanya yonke into kunye nantoni na ofuna ukuyazi malunga nokukhetha kunye nokuyila iikhabhathi ezifanelekileyo zekhaya lakho.
Uyilo lweKhabinethi yeKhabhinethi
Iikhabhathi zekhitshi eliShaker
Iiplanethi zeKhitshi eziPhezulu
Ukubeka iikhabhathi zekhitshi
Iikhabinethi eziPhakanyisiweyo zePhaneli
Iikhabhathi zeKhitshi eziKhihliweyo
I-Mullion kunye nesitayile seKhabhinethi yeKhabhinethi
Uhlobo lweSlab Khitshi yeKhabhinethi
Iibhodi zeBeadboard zasekhitshini
Iikhabhathi zeKhitshi eziLungisiweyo
Isitayela seKhabinethi yesiNtu (isitya esinye kunye noyilo oluphindwe kabini)
Faka iglasi Uhlobo lweKhabhinethi yeKhabhinethi
Isimbo seKhabhinethi seThermofoil seKhitshi
Iminyango yeKhabhinethi yesiqhelo
Umnyango weKhabhinethi yaseKhitshini ugqityiwe
Iikhabhathi zeKhitshi yaseWood (Iindidi zeMithi)
Ukulungele Ukwenza iikhabhathi zekhitshi
Iikhabhathi eziMfutshane zeKhitshi
Iikhabhathi zaseKhitshini zeStock
Cabinets eziMiselweyo zeKhitshi
Isixhobo seKhabinethi yeKhitshi
Izinto zeKhabhinethi yaseKhitshini
Iimpawu zeKhabhinethi yaseKhitshini
Iikhabhathi zeKhitshi yesiNtu
Iikhabhathi zelizwe laseKhitshini
Iikhabhathi zeRustic zasekhitshini
Iikhabhathi zekhitshi laseTuscan
Uhlobo lweeKhabinethi zaseKhitshini zaseYurophu
Uhlobo Cottage Iikhabhathi Zekhitshi
Iikhabhathi zaseKhitshini zaseMexico
Iikhabhathi zeKhitshi zeRetro
Uhlobo lweFrench Kitchen Cabinets
Uhlobo lweeKhabinethi zaseKhitshini zoMsebenzi
Uhlobo lweTshintsho lweeKhabhathi zaseKhitshini
Iikhabhathi zasekhitshini zithatha inkangeleko eyahlukileyo kwaye uhlobo ngalunye loyilo lomnyango wekhabhinethi luhambelana nesitayile esithile soyilo. Nazi ezinye zeendlela eziqhelekileyo zekhabinethi yekhitshi:
Uyilo lwekhabhathi yesitayile esihlukumezayo luvela ngexesha lobukoloniyali baseMelika kwaye lwalubonakala ngokulula kunye nokusebenza ngobuhle. Olu luyilo luhamba kude nokuhonjiswa kwaye luyilo olusebenzisayo. Iikhabhathi zohlobo lweShaker ziyaziwa ngokwakhiwa kwazo okuqinileyo, ukusetyenziswa kwezinto ezisemgangathweni zomthi kunye noyilo olwenziwe ngomnyango oxhonywe ngeefreyimu zomgaqo kaloliwe.
Kucingwa njengenye yeendlela ezithandwayo zoyilo lwekhabhinethi, uyilo lomnyango wekhabhathi e-shaker yenziwe ngocango lwesihlanu kunye nepaneli efihliweyo. Iikhabhathi zesitayile seShaker zilula kakhulu, zicocekile, ezenza ukuba zifaneleke kakhulu kungekuphela kwiikhitshi zemveli eziphefumlelweyo kodwa kuseto lwangoku kunye nolwanamhlanje.
Izinto ezisetyenziselwa iikhabhathi zesitayile esi-shaker ziintlobo ezisemgangathweni zeenkuni ezinje ngemephu, itsheri, i-oaksawnok oki kunye ne-hickory. Ngokugqitywa, iikhabhathi zesitayile esijijekayo zihlala zishiya ziluhlaza kunye nasekugqityweni kwazo kweenkuni zendalo. Nangona kunjalo, ukugqitywa kweekhabethe zesitayile esihlukumezayo kunokuguqulwa ngokuhambelana nesimbo esixhaphakileyo ekhaya.
Ukupeyinta iikhabhathi zesitayile esimhlophe esimhlophe okanye ngwevu, umzekelo, vumela ukuba zilingane kwisimo sangoku. Ukumatanisa itafile yelitye yendalo enobunewunewu kunye nombala osisityebi uyenza ilungele useto lwekhitshi yakudala. Ngenye indlela, ukusetyenziswa kwamabala eenkuni kumbala onzulu, omnyama kunceda ekwandiseni izityebi eziphantsi komhlaba kunye nokuvelisa iipateni ezahlukileyo zomthi. Ngokubanzi, iikhabhathi zesitayile esihlukumezayo zibonelela ngokuguquguquka kunye nokuguquguquka ngokwendlela yoyilo ngaphandle kwemvelaphi yayo yemveli.
Umgangatho ophezulu weenkuni zaseMelika zizinto eziphambili ezisetyenziselwa isitayile seShaker. Imizekelo ye-cherry, i-hickory, i-oak oki yekota kunye ne-cherry. Zonke ezo ziphawuleka ukomelela kunye nokuqina. Olu hlobo lwekhabhathi zasekhitshini zihlala zishiyekile ekugqityweni kwazo kwendalo, kodwa zinokupeyintwa okanye zingcoliswe. Ukugcoba kusetyenziselwa ukuphucula ukutyeba kweenkuni ngelixa iipeyinti zisetyenziselwa ukwenza ukukhanya okungakumbi kunye nomoya. Ipeyinti emhlophe, ye-beige kunye engwevu zezona zikhetho zibalaseleyo ukuba ufuna ukwenza uhlaziyo ngakumbi ukujonga usebenzisa iikhabhathi zekhitshi zesitayile seShaker.
Iikhabhathi zekhitshi zesitayile seShaker zihlala zihambelana nemibala yokukhanya ekhanyayo, ngelixa ukuhonjiswa okunje ngesixhobo kunye nekhabhathi yentsimbi kuyahluka ngokuxhomekeka kwinkangeleko ofuna ukuyiphumeza.
Iiplanethi zeKhitshi eziPhezulu eziPhezulu
Iphaneli yeeflati ekhitshini ekhitshini zibonakaliswe ngoyilo olucocekileyo, olubukhali nolungafakwanga. Olu hlobo lwekhabhathi lubonakaliswe yiminyango enepaneli yeziko elisicaba, endaweni yokuba ibe nomxube okanye iphakanyiswe Phakathi kwazo zonke izitayile zekhabinethi yasekhitshini, uyilo lwepaneli yeflethi lunezona zinto zintle kakhulu ezingasebenzisi naluphina ulwazi.
Iphaneli yeeflati zekhitshi ekhitshini zihlala zingena kumthi oqinileyo okanye ukuhombisa okugqityiweyo. Sebenzisa ukhuni oluqinileyo kuyilo oluphangaleleyo lwekhitshi loyilo lwekhabhathi ibonisa ubuhle obuhlaza, bendalo bemithi, ngaphandle kwaso nasiphi na isidingo sokuhonjiswa okongezelelweyo okanye umhombiso. Nangona kunjalo, ukuba iprojekthi ixhomekeke kukhetho oluhle ngakumbi lohlahlo-lwabiwo mali, iiplanga ezinokuhombisa zinokusetyenziselwa ukulinganisa ukubonakala kweenkuni zokwenyani. Iphaneli elaminethiweyo lenjongo yekhabhathi ekhitshini ikwanikezela ngemibala eyahlukeneyo, uyilo kunye neepateni onokukhetha kuzo, ekuvumela ukuba wenze uyilo olululo lwekhabhathi yekhitshi ehambelana nokuthanda kwakho kunye nokukhetha kwisitayile.
Iphaneli yeflethi ekhitshini ekhitshini ibonisa ubuhle bokwenyani ngokulula kunye ne-aesthetics yayo encinci kunye nemigca echaziweyo ecocekileyo. Isitayile kwaye senza umdlalo omkhulu kwizitayile zangoku kunye nezangoku zekhitshi. Nangona iikhabhathi zekhitshi ezicabaleleyo zinomtsalane ococekileyo nococekileyo, zikwalungele kakhulu izitayile zasekhitshini zemveli kunye nezenguqu.
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi olungafakwanga lubonakaliswe kuyilo apho iidrowa kunye neminyango ilingana ngokupheleleyo ngaphakathi kuvulo lwesakhelo sobuso bekhabhinethi. Ngokwesiqhelo, uninzi lwezitayile zekhabinethi yekhitshi zisebenzisa ulwakhiwo olwalekelweyo apho iingcango kunye nezihloko zezihloko zikhudlwana kancinane kunokuvuleka kwesakhelo, yiyo loo nto zibonakala ngathi ziphakanyisiwe kancinane. Ngaloo ndlela, umnyango kunye neentloko zibonakala ngathi zakhiwe ngendlela edibeneyo. Kodwa ngesitayile sekhabhathi esetiweyo, indlela yokwakha kunye noyilo zichasene ngokupheleleyo. Iingcango zekhabhinethi kunye nezihloko zingaphakathi kuvulo, zinendawo encinci phakathi kwamacandelo, yiyo loo nto igama elithi inset. Xa kuthelekiswa nezinye izitayile zekhabhinethi yasekhitshini, uyilo lwekhabhathi yangaphakathi ekhitshini inika umbono opheleleyo ngesakhelo sekhabhinethi.
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi olungaphakathi luthathe ugqozi kumaxesha eVictorian naseGeorgia yayingabachweli abanezakhono kwaye amagcisa ayethandwa kakhulu. Njengoko umntu enokuqaphela, olu luyilo lomnyango wekhabhathi yekhitshi lufuna izakhono ezichanekileyo kunye nendlela yokwakha ehlaziyiweyo yokwenza. Ke, zihlala zibiza kakhulu kwaye zihlala ziwela kwinqanaba eliphezulu.
Uyilo olumkileyo, isitayile sekhitshi ekhitshini elingeneyo linika inkangeleko ecocekileyo, ehlaziyiweyo ekhupha ubulula kunye nokuqaqamba, ukuyenza ibe lukhetho olufanelekileyo kuluhlu olubanzi lokukhuthaza uyilo lwangaphakathi. Yenziwe ngokwezifiso kakhulu, kwaye inokuhlengahlengiswa kusetyenziswa iinkcukacha ezisemaphethelweni eziza kukuvumela ukuba wenze inkangeleko eyenziwe ngokwakho ekhayeni lakho. Abanye abavelisi banikezela ngohlobo lokufakwa ngaphakathi olunamaso kwaye alungenantsimbi lufakwe kumnyango wekhabhathi uqobo, ukubonelela ngeenkcukacha ezicwangcisiweyo zoyilo ezongeza kubuhle bekhitshi, ngaphandle kokugagamela zonke ezinye izinto kwisithuba. Ukubumba kunye nezinye izinto zokuhombisa zinokongezwa, kuxhomekeke kwinkangeleko ofuna ukuyifumana. Ifanelekile kwizimbo zesiko, zenguqu kunye nezangoku.
Isitayile sekhabhathi yekhitshi ephakanyisiweyo ibonakala ngoyilo lomnyango apho iphaneli yeziko iphakanyiswe ngaphezu komnyango wekhabhinethi yonke kwaye ihonjiswe ngomda ojikeleziweyo, umda okanye iprofayili. Iikhabhathi zekhitshi eziphakanyisiweyo zineenkcukacha ngakumbi xa kuthelekiswa neekhabhathi zephaneli ezifihliweyo.
Olu hlobo lwesitayile sekhabinethi yasekhitshini luqhele ukusetyenziswa kwiikhitshi zesiko nezesitayile sotshintsho. Ihlala ifumaneka kumakhaya aphekileyo kunye nasekhitshini. Ukubonakala kwayo kunokuba yinto entle okanye elula kwaye ingahluka ngokuxhomekeka ekubeni leliphi ixesha lesitayile elifumana ukuphefumlelwa kulo. Olunye uhlobo lweepaneli eziphakanyisiweyo zekhabinethi ngumnyango wekhabhathi weshedyuli okanye uyilo oluphakanyisiweyo lwe-arch (ekwahlelwa phantsi kwesitayile sekhabinethi yendabuko).
Ukusetyenziswa koyilo lwepaneli ephakanyisiweyo akuphelelanga kuyilo lwesiko lodwa njengoko inokusebenzela useto lwenguqu. Olona loncedo luphakamisileyo iikhabhathi zasekhitshini zekhitshi ezibonelela ngokwendlela yoyilo kukuba yongeza ubungakanani kwisithuba.
Iikhabhathi zekhitshi ezihlaziyiweyo zophiko oluchaseneyo ziikhabhathi zekhitshi eziphakanyisiweyo. Umahluko ophambili phakathi kweendlela ezimbini kukuphakama kwepaneli yeziko lobuso bomnyango wekhabhinethi. Isitayile sekhabhathi sekhitshi esitshixwayo siphawulwa ngoyilo lomnyango apho iphaneli yeziko ethe tyaba ifunyenwe ngaphantsi komnyango wekhabinethi kwaye ihonjiswe ngomda ojikeleziweyo, intaba okanye iprofayili. Uyilo lwekhabhathi e-Shaker inokuhlelwa phantsi kwesitayile sekhabhathi yekhitshi esecaleni kwaye ithathwa njengenye yezona zitayile zisetyenziswayo zekhabinethi.
Xa kuthelekiswa nesitayile sekhitshi esiphakanyisiweyo, uyilo lwekhabhathi lwasekhitshini oluseluvavanyo lunenkangeleko ethe kratya, luyenza ilungele ngakumbi izitayile zokuhombisa zangoku kunye nezangoku. Ubukho obuncinci bokuhonjiswa buhambelana noyilo oluncinci kunye nokulula kwayo kuyivumela ukuba idibane kakuhle nezinto zangaphakathi eziphefumlelweyo. Xa kuthelekiswa nekhitshi ephakanyisiweyo yekhabhathi zeziphi iikhabhathi, le ndlela inikezela ngeendlela ezahlukeneyo kwaye inokusebenza nakwiseto setshintsho kunye nesiko lekhitshi.
Iingcango zeAccent zisetyenziswa ekhitshini ukubonelela ngomdla owongeziweyo kwizithuba. Uyilo lomnyango wekhabhinethi luhlala lusetyenziswa njengee-aksenti okanye izinto eziqaqambileyo ukugxininisa indawo ethile ekhitshini, endaweni yokuba isetyenziselwe indawo yonke yekhitshi. Ezinye iingcango zekhabinethi ezigxininisayo zisebenzisa izinto zokugqiba ezizodwa ezinjengokukrolwa kwiphaneli yeenkuni okanye izinto zemingxunya kwiphaneli yeglasi. Ngokwesiqhelo, ucango lwekhabhathi lwe-aksenti lufakwe njengeyunithi yokugcina ngaphezulu okanye ngaphezulu komqolo weekhabhathi, zihlala zisetyenziselwa ukubonisa i-dinnerware entle kunye ne-china exabisekileyo. Umzekelo weengcango zekhabinethi ezigxininisayo yiminyango yokufaka iglasi, iikhabhathi ezikhokelwe ngeglasi, iingcango zesitayile se-mullion, iingcango ze-louver, ucango lwentsimbi engenasici kunye neengcango zealuminium.
Olunye uhlobo oludumileyo lomnyango wekhabhinethi egxininisayo yindlela yokwenza i-mullion. Isitayile semullion isitayile somnyango wekhitshi sisebenzisa ii-mullions okanye ezithe nkqo kunye namalungu athe tye ahlukanisa iiglasi okanye izikrini, ezisebenza njengezinto zokuhombisa zokwakha iingcango kunye neefestile. Izithambiso zinokuba zigoso, ngqo, zi-arched okanye kwipateni yedayimane. Ngaphandle kokusebenza njengokuhombisa okuhonjisiweyo, izitayile ezime nkqo kwikhabhathi yekhitshi ye-mullion ikwasebenza njengokhuseleko ekuqhekekekeni kweglasi nanjengenkxaso yomnyango eyongezelelweyo. Umnyango wekhabhathi yesimbo se-mullion usebenzisa ukufakwa kweglasi okubekwe ngasemva komnyango wekhabhathi. Ikwabizwa ngokuba sisimbo sefestile ngenxa yokufana kwayo nefestile ebunjiweyo. Uyilo lwekhabhathi yekhitshi ekuthiwa yi-mullion lukwahlukile kwiglasi yokufaka ikhabethe, kodwa izitayile ziyongezwa ukwenza uhlobo olufana nolwakhiwo oluphefumlelweyo lwefestile yaseFrance.
Uhlobo lwekhabhathi yekhitshi ye-mullion yeyona nto ilungele amakhitshi emveli, eklasikhi kunye notshintsho. Ibonisa ukungaphelelwa lixesha kunye nobuhle, ngelixa unika imvakalelo yesiko ekhitshini. Nangona kunjalo, inokusetyenziswa kuseto lwangoku, njengoko uyilo lukwazi ukwenza ngokwezifiso kakhulu. Sebenzisa i-aksenti ebunjiweyo yefestile ebhangiswe ngesixhobo esenziwe ngesinyithi esenziwe ngebrashi yentsimbi inokuhlaziya ngokulula imbonakalo yeminyango yekhabhinethi yasekhitshini.
Isitayile sekhabhathi yekhitshi esilelona lolona lucacileyo nolulula kwiminyango yekhabinethi ngenxa yokubonakala kwayo ngaphandle kwesakhelo. Iingcango zeslab zesitayile sekhabhathi zithatha igama lazo kwaye zibonakaliswa ngesiqwenga esinye somthi, esingafakwanga kwimpahla. Ayinayo i-embellishments enjengokubumba okuhombisayo okanye i-edgings kwaye ayihluthwanga.
Uyilo lwekhabhathi yekhitshi yoyilo luqhele ukusetyenziswa kwiikhikhini zala maxesha nezangoku ngenxa yendlela elula yokujonga, yokuhlengahlengisa kunye nokujonga okuncinci. Inika iingcango zekhabhinethi ukubukeka okuthe tye kwaye okuthe tye. Kodwa ngaphandle kobukhazikhazi banamhlanje nobuhle bayo, yeyona ndlela incinci yoyilo lwekhabhinethi. Uhlobo lweSlab lweekhitshi zasekhitshini nazo zibiza kakhulu xa kuthelekiswa noyilo lwesiko olufana nesitayile sekhabhathi yekhitshi likaShaker.
Ibhodi yebhodi ngumqolo wamaplanga amancinci emithi athe nkqo nkqo. Iplanga ngalinye lomthi lineqolo elincinci phakathi okanye ngokudibeneyo apho amaplanga adibana khona ekuthiwa ngumkhonto. Uhlobo lokwakha oludweliswe yibhodi yebhodi yesiko ngokwesiqhelo lulandela uqhagamshelo lolwimi kunye nomjelo apho ulwimi lweplank lufakwa khona kumjelo weplank elandelayo, ngokudibanisa ngokugqibeleleyo iziqwenga zeeplanga kunye ukwenza ipaneli epheleleyo yemilenze ethe nkqo.
Iipaneli zebhedi yebhodi zihlala zisetyenziswa njengonyango lokuhombisa iindonga ngexesha lokucoca izindlu ngaphakathi kwaye zihlala zisetyenziswa njengodonga lokugqitywa ngaphambi kokutyabeka, ipeyinti kunye nodonga olomileyo. Inokufumaneka nakwigumbi lokuhlambela, kwigumbi lokuhlala kunye nakwigumbi lokulala.
Isitayile sekhabhathi yekhitshi ye-beadboard isebenzisa uyilo lomnyango wekhabhathi apho iphaneli yeziko ijongeka njengepaneli yendabuko yebhodi yebhodi. Ngokwesiqhelo, iingcango zekhadibhodi zekhitshi zipeyintwe ngombala omhlophe okanye okhanyayo ukuxhasa izithuba zemveli. Iikhabhathi zekhitshi laseBeadboard zihlala zinxulunyaniswa nelizwe, indlu yasefama okanye iikhitshi eziphefumlelweyo. Banikela ngerustic kunye ne-cottage charm emakhitshini, ibenza bazive befana nekhaya kwaye becocekile.
Umtsalane we-chic iikhabhathi zekhitshi lebhedi yenze ithandwe kwindawo yoyilo ekhitshini. Rhoqo ipeyintiweyo emhlophe, isitayile sebhedi yebhodi yekhabhathi yekhabhathi ivelisa imeko ekhanyayo ekhitshini. Nangona kunjalo, enye into ebaluleke kakhulu ekusebenziseni iibhodi zebhodi ekhitshini yikhitshi kukugcina okufunekayo. Ii-grooves kunye ne-slats phakathi komnyango wekhabhathi kunokuba nzima ukuzicoca.
Iingcango zekhabinethi ezivuselelweyo zisebenzisa iisilayiti ezithe tyaba ezime ngokulinganayo phakathi komnye nomnye. IiLouvers zihlala zisetyenziswa kwiifestile, iingcango zangaphakathi kunye neziqwenga zefanitshala, kodwa ukuziguqula zibeyilo lomnyango wekhitshi ekhitshini longeza inani elinomdla kwibala.
Ngaphandle kwe-aesthetics ethi abathandi banegalelo kwiikhabhathi zasekhitshini, izithuba phakathi kweengcango ezithandwayo zibonelela ngokungenisa umoya ngokwaneleyo. Olu hlobo lwesitayile somnyango wekhabhathi alusetyenziswanga ekhitshini kuphela kodwa nakwizicelo ezininzi ezifuna umoya, njengekhabhathi yokomisa iimpahla, isihlangu okanye ikhabethe kwikhabhathi, ikhabhathi yezixhobo zokuzonwabisa zasekhaya ezinjengeebhokisi zekhebula okanye abadlali beDVD okanye indawo yokufihla iyunithi yomoya.
Izitayile zekhabinethi yesiko lasekhaya zihlala zihonjiswa njenge-arch enye ngaphezulu kobuso bekhabhinethi okanye ipaneli yomnyango. Uhlobo oludumileyo lwesitayile sekhitshi yemveli yisitayile se-cathedral okanye uyilo oluphezulu lweedolophu. Le ikwayindlela esetyenziswa ngokuxhaphakileyo yoyilo lwekhabinethi yezindlu zebhajethi kunye neendawo zokuqeshisa. Ngenxa yexabiso elifikelelekayo, ikwasetyenziselwa ngokubanzi uhlahlo-lwabiwo mali lweeprojekthi zokuhlaziya ikhaya.
Olunye umahluko kwisitayile sekhabhathi yemveli yindlela yesibini yekhabinethi yendabuko. Olu luyilo lusebenzisa iiarches ezijikeleziweyo ezibini, endaweni yelinye, ezifumaneke zombini ngaphezulu nasezantsi kwepaneli. Uyilo lwe-arch luveliswa ngokusetyenziswa kwemijelo enzulu evelisa isithunzi. Xa kuziwa kwiindleko, uyilo olunye lwearch kunye noyilo oluphindwe kabini olunamaxabiso afanayo.
Olu luyilo lunokufezekiswa ngokusetyenziswa kwemithi eqinileyo yendalo, i-thermofoil okanye i-MDF.
Iglasi yokufaka isitayile sekhitshi yekhitshi isebenzisa ipaneli yeglasi endaweni yobuso obuqinileyo bomnyango wekhabhathi. Eyaziwa nangokuthi ngumnyango weglasi owenziwe ngohlobo, olu hlobo loyilo lwekhabhathi yekhitshi lunokusebenzisa iglasi ecacileyo, ukutshaya okanye iglasi enqabileyo, iglasi enombala okanye iglasi ebunjiweyo. Uhlobo oluxhaphakileyo lweglasi yeglasi esetyenzisiweyo kuyilo lweglasi ecacileyo evumela abasebenzisi ukuba babone imixholo yeekhabhathi ngaphandle kokuvula umnyango. Ngaphandle koko, ingilazi enqabileyo ingasetyenziselwa ukuba ufuna ukugcina i-clutter ngaphandle kwamehlo ngelixa unikezela ukuhluka kwezinto ekugqibeleni kunye nokuphula ubunzima bekhabhinethi eqinile. Iglasi enqabileyo ikwaqhele ukusetyenziswa ngakumbi kuyilo lwala maxesha nolwanamhlanje.
Isimbo seglasi sekhitshi yekhitshi asiboneleli ngendlela efanelekileyo yokufumana izixhobo kunye nezixhobo ekhitshini, kodwa ikwabonelela abanini khaya indlela yokubonisa kunye nokubonisa ingqokelela yabo yetafile kunye nesitya sangokuhlwa. Ukongeza koku, olu hlobo loyilo lwekhabhathi yekhitshi lukwanika imvakalelo evulekileyo ekhitshini, eyenza ukuba ibe nomoya kwaye ibonakale.
Iikhabhathi zasekhitshini zeThermofoil ziluhlobo lwekhitshi lekhitshi elenziwe nge-MDF okanye ifreyibhodi exineneyo. Iingcango zibunjiwe ngaphandle, zisongelwe ngeplastikhi kwaye zivunyelwe ukubhaka kubushushu obukhulu ukwenza itywina elingenakungena. Xa kuthelekiswa nokupeyinta rhoqo, ukungcolisa kunye nokutyabeka, oku kugqiba kuyadinisa kwaye endaweni yokusebenzisa umthi oqinileyo, kusetyenziswa izinto ezidityanisiweyo.
Izinto ezimbini ezenza olu hlobo lwekhabhathi zasekhitshini zi-thermofoil kunye ne-MDF. I-Thermofoil luhlobo lwezinto eziguqukayo, ezincinci ze-vinyl ezingenawo umxholo wesinyithi. Isebenza njengomaleko wokwaleka okutshiweyo okucinezelwe ngaphezulu kwezinto eziphambili zekhabinethi eyi-MDF. I-MDF, okanye i-fiberboard exineneyo, kwelinye icala, yenziwe ngemicu yeenkuni ehlaziyiweyo ebotshelelwe zii-resins. Ngumatshini owomileyo kwaye ucinezelwe kwiimakhishithi ukuvelisa izinto ezizinzileyo nezomeleleyo ezingcono kunomthi oqinileyo.
Iikhabhathi zasekhitshini ze-MDF Unokuma ubushushu ngcono kwaye uhlengahlengise kakuhle kutshintsho kubumanzi kunye nokuvezwa kukufuma. I-MDF iyodwa ayinamandla ngokwaneleyo ukuba ingasetyenziswa njengekhabhathi yekhitshi, kodwa yakuba inyangiwe nge-thermofoil, isiphumo ngumnyango wekhabhathi ogudileyo omelana nokuchaka nokonakalisa ngcono kuneekhabhathi ezipeyintwe rhoqo.
Iikhabhathi zasekhitshini zeThermofoil zihlala ziveliswa ngobuninzi kwaye zihlala zisetyenziswa kwiinkqubo zeekhitshi zemodyuli. Zezona zinto ziphambili kuhlaziyo lwekhitshi, iikhondomu, amagumbi kunye noomasifundisane. Inokuqina okuphezulu, kodwa nje ukuba yonakaliswe, kunokuba nzima ukuyilungisa. Iikhabhathi zasekhitshini zeThermofoil zithathwa njengezinexabiso eliphantsi kwaye zikwanikezela ngokuguquguqukayo kunye nokuguquguquka ngokwendlela yoyilo. Ihlala ivela emaplanga njengokugqitywa okubonisa iipateni zokucoca okanye ngemibala eqinileyo.
Iikhabhathi zasekhitshini ze Thermofoil nazo zilula ukuzigcina. Ingacocwa ngokulula ngokusula kwaye ixhathise amabala ngcono xa kuthelekiswa neenkuni zendalo. Ngokungafaniyo nekhabhathi yomthi eqinileyo efuna ukutywinwa, iikhabhathi ze-thermofoil azifuni naluphi na unyango olukhethekileyo ukuze lukhuselwe.
Olona phuculo luphambili lweekhabhathi zekhitshini ze-thermofoil kukuba alumi ukufudumeza kakuhle. Ukunganyangeki kwabo kubushushu kubangela ukuba i-laminate isuke kwiphaneli ye-MDF. Ngaba oko, ukuzifaka kufutshane kakhulu nomthombo wobushushu kunokubangela ingxaki kamva, kodwa lo mbandela unokulungiswa ngokufaka ikhaka lobushushu kwiikhabhathi. Enye ingxaki eyenziwa ziikhabhathi zekhitshi ze-thermofoil kukuba imibala eyahlukileyo ekhanyayo ithambekele ekubeni nombala kwaye inokujika ibe tyheli ngokuhamba kwexesha. Nangona kunjalo, izinto ezintle zekhabhathi yekhitshi ye-thermofoil zide zigqwethe ezo zingalunganga, ezenza ukuba ibe yeendleko ezifanelekileyo kwikhabhinethi.
Ukuba awufumani nasiphi na isitayile sekhitshi yoyilo esingahambelani nolwazelelelo lwakho, ungasoloko ujonga abenzi bekhabhinethi yoyilo lwesiko enokukunceda uguqule uyilo lwakho lube yinyani. Ingcibi kunye nabenzi bemveliso yokusila bangenza nasiphi na isitayile okanye bajonge obafunayo kwaye banokwenza ubunjani obukhethekileyo, imizobo kunye neenkcukacha zokuhombisa ezisekwe kukhetho lwakho.
Iingcango zekhabhinethi yekhitshi yesiqhelo zezo zenziwe ukuba zi-odolwe ngokweemfuno ezithile kunye nokukhethwa ngumthengi. Nangona kunjalo, olu khetho luthathwa njengeduru ngenxa yomsebenzi, ixesha kunye nomzamo oya kuwo.Sigubungela iikhabhathi zasekhitshini ngokwenkcukacha ezithe kratya kubandakanya iintlobo zehardware, ezigqityiweyo kunye neentlobo zomnyango apha ngezantsi.
Ukugqitywa linyathelo lokugqibela elongezwe kwikhabhathi yekhitshi emva kokuba bezokwakha. Injongo yokugqiba izinto ukongeza umbala, ukuphucula ubuhle kwaye kwangaxeshanye, ukubonelela ngokhuseleko ukongeza iikhabhathi zasekhitshini. Kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo xa usenza isigqibo sokugqiba kwikhabhinethi yakho, kwaye nganye ineempawu zayo ezilungileyo nezingalunganga. Nazi iintlobo ezithile zokugqitywa kocango lwekhabhathi yasekhitshini:
Ibala - Ukugcoba luhlobo lwekhabhathi eligqibeleleyo elisebenzisa ivanishi, i-lacquer, i-polyurethane okanye i-shellac eyonyusa umbala wendalo wokhuni. Ngokwenkcazo, amabala eenkuni adityaniswa ngemibala enqunyanyisiweyo kwisithuthi esifana notywala okanye iarhente yokugqibezela efana nevanishi, i-lacquer, i-shellac okanye i-polyurethane. Le mibala ayichithwanga ngokupheleleyo kwisithuthi.
Ukugcoba kuvelisa ipateni yendalo yokucola iinkuni. Amaqhina kunye neenkozo zomthi zifunxa ibala, zibashiye ngombala omnyama kunye nembonakalo ebalasele ngakumbi. Inika ukujonga okwenziwe ngesandla kwiikhabhathi zasekhitshini, ngelixa ivumela ubuhle bayo bendalo ukuba bume. Ibala leenkuni linokusetyenziswa ngokulula kwiikhabhathi zasekhitshini ngokurabha ngesandla okanye ukusebenzisa ilaphu.
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa usebenzisa amabala emithi ziintlobo zomthi ozisebenzisayo. Ezinye iinkuni zivame ukufumana amanxeba angcono xa ezinye zihlamba kwiindawo ezincinci. Ngokubanzi, oku kugqitywa kudala uxinzelelo kunye nefuthe lokuqaqambisa kwikhabhathi yamaplanga.
Ipeyintiwe - Iipeyinti azisetyenziswanga kuphela ngaphakathi nangaphandle kweendonga nophahla kodwa nakwikhabhathi yekhitshi. Ikwayenye yezona zilula zilula kwaye zikhawulezayo ukugqiba kunye nokuhlaziya ukujonga kweekhabhathi. Ingubo entsha yepeyinti yeekhabhi zasekhitshini inokutshintsha kwangoko ukubonakala kwekhitshi kunye nomlinganiswa.
Ipeyinti iyafumaneka ngenani elingenamda le-shades, evumela abaninikhaya ukuba benze ikhitshi yabo yekhitshi kuwo nawuphi na umbala ohambelana nokhetho lwabo kunye nesitayile. Ngaphandle kwalonto, kukho ipeyinti ezininzi ezigqityiweyo umntu anokukhetha kuzo. Omnye umzekelo odumileyo wokugqitywa kwepeyinti yeDuco enika iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngokhuni ezigqityiweyo ezifihla iinkozo zendalo. Olu hlobo lokugqitywa kwepeyinti lunokusetyenziselwa ukufezekisa i-gloss ephezulu, i-gloss semi, i-satin okanye i-flat finish. Inika ikhabhathi yekhitshi umphezulu ogudileyo kunye nembonakalo ebizayo nenobunewunewu.
Uhlobo lwepeyinti elisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi ngomthi yipeyinti ye-enamel ye-acrylic, ipeyinti esekwe emanzini okanye iipeyinti zealkyd. Ipeyinti ye-Acrylic okanye yamanzi luhlobo lwepeyinti enokucocwa ngokulula ngamanzi. Ziqulathe umsi omncinci kwaye zihlala zingenaphunga. Ipeyinti yeAlkyd, kwelinye icala, ioyile isekwe kwaye ihlala inevumba elinamandla. Endaweni yokusebenzisa amanzi ukucoca, iipeyinti zealkyd zisebenzisa imimoya yezimbiwa.
Ipeyinti ifumaneka ngokulula kuninzi lweevenkile zokuphucula amakhaya ngexabiso elifikelelekayo. Ukongeza koko, ipeyinti inokusetyenziswa ngokulula kwaye inokwenziwa njengeprojekthi ye-DIY. Ukupeyinta iikhabhathi zasekhitshini kunokwenziwa ngesandla usebenzisa ibrashi yepeyinti okanye ibrashi yokuhambisa. Ngenye indlela, inokusetyenziswa ngokutshiza kusetyenziswa icompressor yepeyinti.
Ivanishi - IiVarnishes zihlala zisetyenziswa njengebhaskiti ephezulu yepeyinti okanye iikhabhathi zekhitshi ezinamabala.
Olu gqibo lubonelela ngokuzinza, ukumelana nobushushu kunye nokugcina iikhabhathi zisonakala. IiVarnishes ngokwesiko zenziwe ngokudityaniswa kwentlaka kunye neeoyile. Njengoko iyoma, isiphumo yindawo enzima kunye nokuphela kokunganyangekiyo kwiikhabhathi. IiVarnishes zikwahluka ngemibala. Iivarnish ezinombala zinemibala etyebileyo enokusetyenziselwa ukubonisa ipateni yokugaya ngaphezulu. Ngaphandle kweevarnishi zemveli kunye nezipeyintiweyo, ezinye iintlobo zokugqitywa zibandakanya ivanishi eyenziwe yasebenza, ivanishi ekhawulezayo esebenza ixesha elide neyomeleleyo enganyangekiyo, kunye ne-polyurethane varnish, ethe tyaba kwaye yenza imbonakalo ebengezelayo yeekhabhathi zasekhitshini.
Enye into ebuyela umva kolu hlobo lokugqitywa kwekhabinethi kukuba banotyekelo lokuchitha kunye nokunxiba ixesha elingaphezulu.
Iakisi - Ukugqitywa kwe-acrylic luhlobo lwesiphelo esingeyityhefu ikakhulu esenziwe nge-acrylic acid. Inika iikhabhathi zasekhitshini ukugqiba okuphezulu okugudileyo kwaye ine-sleek, isipili esifana nokubonakala. I-acrylic ifumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala enokuhambelana neeplette zasekhitshini. Olu hlobo lokugqiba luyaziwa ngokuhlala iminyaka, ngaphandle kokuphela okanye ukuguqulwa kombala.
Iikhabhathi zasekhitshini ze-Acrylic zihlala zisetyenziselwa izinto zangaphakathi zekhitshi zangoku kunye nezincinci.
Zimbini iintlobo zokugqitywa kwe-acrylic iikhabhathi zasekhitshini, ezizezi: iingcango eziqinileyo ze-acrylic kunye neminyango ejongene ne-acrylic. Iingcango eziqinileyo ze-acrylic zinokubonakala okutyebileyo kuba umzimba wabo uphelele ugqityiwe nge-acrylic. Imibala yabo ingaphezulu, kodwa banexabiso eliphezulu. Ngakolunye uhlangothi, iingcango ezijamelene ne-Acrylic, zigqunywe kuphela ngamanqanaba e-acrylic. Inkqubo yokuvelisa ibandakanya ukufaka amaphepha e-acrylic ngaphezulu kwepaneli ye-MDF. Ezi bhodi ziyatywinwa emaphethelweni kwaye zifakwe ngetywina lokhuselo.
Ezinye izinto eziluncedo zokugqiba iikhabhathi ze-acrylic zibandakanya ukuzinza okuphezulu, ukukwazi ukumelana nokunxiba kunye nokukrazuka ekusebenziseni kwemihla ngemihla, kunye nokumelana nokukrwela. Ukongeza kuloo nto, i-acrylic yokugqiba iminyango yekhabhinethi yasekhitshini kulula ukuyicoca. Nangona kunjalo kusekho iingxaki ezimbalwa kolu hlobo lokugqitywa kwekhabhinethi. Kuba ukugqitywa kwe-acrylic kubukeka bukhazimla, iminwe kunye nokungcola kuyabonakala kumphezulu wekhabhinethi, yiyo loo nto ifuna ukusulwa rhoqo nokucoca rhoqo. Ukongeza koku, ukugqitywa kwe-acrylic kuyabiza kakhulu xa kuthelekiswa nezinye izinto ezigqityiweyo kwikhabhinethi.
Eqaqambile - Injengokubengezela luhlobo lokugqitywa kweengcango zekhabinethi ekhitshini ezisebenzisa i-glaze okanye isambatho esicace gca okanye esisemgangathweni esisetyenziselwa ngaphezulu kwekhabhathi epeyintiweyo okanye enamabala. Injongo yokugcoba kukongeza umbala okanye ukubengezela okukhazimlayo kwiikhabhathi zasekhitshini. Injengokubengezela ikwaqaqambisa iinkcukacha zoyilo kumnyango wekhitshi lasekhitshini, njengokuhombisa, ukubumba, iikona kunye nezinye izinto ezenziweyo. Kuthathelwa ingqalelo njengohlobo lweprimiyamu lokugqitywa kwekhabhinethi.
Iikhabhathi zekhitshi ezimenyezelweyo ziza ngeendlela ezimbini. Okokuqala, ngumnyango wekhitshi owenziwe kwangaphambili osele ulungisiwe kwaye ugqityiwe, ngelixa omnye ungabandakanya ukufaka isicelo kwivenkile ethengwe ngeglasi. Inkqubo yokugaya ibandakanya ukupeyinta okanye ukonakalisa ikhabhathi kuqala, emva koko uyivumele ukuba icte ixesha elithile. Nje ukuba ipeyinti okanye ibala limile, isambatho esincinci se-glaze sisetyenziswa ngaphezulu komnyango wekhabhathi, kusetyenziswa ibrashi, emva koko kucinywe okugqithileyo. I-glaze iyavunyelwa ukuba inyange kwaye xa sele yomile ngokupheleleyo, idyasi ephezulu ye-polyurethane yongezwa.
I-Glaze ihlala iza nemibala eyahlukeneyo enje ngobhedu, i-mocha, i-krimu, umhlophe, ikofu, njlnjl. Zimbini izinto ezigqityiweyo zokugaya ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini ezizezi: i-glaze emhlophe kunye ne-glaze emnyama. I-glaze emhlophe isetyenziswa kwiikhabhathi ezimhlophe ezipeyintiweyo, ngelixa i-glaze emnyama ihlala isetyenziselwa iikhabhathi ezinamabala. Abanye badibanisa zombini ukuze kuveliswe ukubonakala kwe-antique.
Iikhabhathi zekhitshi zaseGlaze zinika imbonakalo ye-antique kunye ne-rustic, ilizwe elidala liziva likhitshini. Ilungele ilizwe okanye i-rustic ephefumlelweyo yokuseta ikhitshi. Ukugqitywa okugqityiweyo kulungele kakhulu iikhabhathi ezinemifanekiso eqingqiweyo kunye neenkcukacha.
Iindleko eziqhelekileyo zokugcoba iikhabhathi zasekhitshini zii-8 ukuya kwi-10 zeedola ngeenyawo zekwere.
Ukugqitywa kokugqitywa - Ukugqitywa kwe-weathered, okwaziwa ngokuba kukudandatheka okanye ukugqitywa kwexesha elidlulileyo, luhlobo lwefeksi yokugqitywa eyongezwa kwiikhabhinethi zasekhitshini ukubanika ukubonakala okugugileyo okanye ukubonakala okudala.
Iikhabhathi zasekhitshini ezixinzelelweyo zangaphambili zinokuthengwa kwabanye abathengisi. Nangona kunjalo, oku kugqitywa kunokufezekiswa ngokuthi 'zenzele ngokwakho iprojekthi usebenzisa izinto ezilula kunye ne-antiquing glaze esele ilungile. Inkqubo ibandakanya isanti eninzi ukufumana ukubonakala okukhoyo kunye nokuguga okugugileyo. Unokufunda ngakumbi malunga iikhabhathi zasekhitshini ezixinzelelweyo Apha ukufezekisa ukugqitywa kwezinto, okanye ubone imifanekiso Iikhabhathi ezimhlophe ezixineneyo zekhitshi Apha.
Iikhabhathi zekhitshi ezigqityiweyo zikhupha imvakalelo ye-antique kunye ne-vibe back. Oku kugqibela kuqhele ukusetyenziswa kwiikhitshi zemveli eziphefumlelweyo ezinje ngelizwe, ilizwe lakudala kunye nesimbo se-rustic. Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe ezixinzezelekileyo zikwisiseko sokutya kweekhitshi ezinomtsalane
UPatina kunye neHeirloom - U-Patina kunye nokugqitywa kwe-heirloom lolunye uhlobo lokugqitywa kweediliya okunika iikhabhathi zasekhitshini ukujonga okudala. Ezi zinto zigqityiweyo zisebenzisa iinkcukacha ezenziwe ngesandla kunye nobugcisa bokuvelisa umlinganiswa ozelwe ngexesha. U-Patina kunye nokugqitywa kwe-heirloom nazo zikulungele ngokufanelekileyo kwiikhitshi zesiko.
Ukugqitywa kwendlalifa kudala ukubonakala okudala kusetyenziswa amabala, ukuqaqambisa kunye noxinzelelo. Phambi kokuba kugqitywe ukugqitywa, iikhabhathi zasekhitshini ziphantsi kwenkqubo yokuphazamiseka ukuyinika ukubonakala kwangexesha. Isanti, ukujija amazinyo kunye nokulungisa imiphetho kunye neekona kunika ukungafezeki kweekhabhathi zamaplanga. I-Glaze isetyenziselwa ukugxininisa iinkcukacha zomnyango. Ukwenza ukubonakala kwe-rustic kunye nokuguga, ukungafezeki okungakumbi kunokuongezwa.
Ukugqitywa kwepatina kukwayindibaniselwano yeendlela ezahlukeneyo ezibandakanya, ngaphezulu kwesanti, uxinzelelo kunye nokuqaqamba. Iikhabhathi zikwaphantsi koxinzelelo olukhulu kusetyenziswa isisele ukuze kuveliswe amanqaku, ukuqhekeka ngokudibeneyo, iintaka zeentaka kunye nebrashi eyomileyo emva koko kufakwa iiglasi glaze ukugxininisa iinkcukacha zomnyango. Isiphumo kukubonakala okudala kunye nolunye uhlobo.
Elaminethiweyo Gqiba - IiLaminates zizinto ezidumileyo zokugqiba iikhabhathi zasekhitshini. Luhlobo lwezinto zokwenziwa ezenziwa ngamanqanaba aliqela abekwe ndawonye. IiLaminates zenziwe ngeemakhishithi ezincinci kodwa zomelele kakhulu kwaye zomelele ngenxa yobume bezinto ezizodwa. IiLaminates zinee-resin ezintathu eziqinisiweyo. Uluhlu oluphezulu lwee-laminates lwenziwe ngothango lwe-melamine resin. Uluhlu lwesibini luyaziwa njengoluhlu lokuhombisa kuba luqukethe ipateni, uyilo, ubume kunye nombala we-laminate. Umaleko wesithathu, okwaziwa ngokuba ngumaleko osisiseko, wenziwe ngephepha lekraft eliqiniswe zii-resins. Umaleko wesine, okwabizwa ngokuba ngumaleko wokunxiba, ubukhulu becala ubunjwe ngee-oxide ze-aluminium, i-resin melamine kunye nephepha.
Iilaminates zihlala zisetyenziselwa ngaphezulu kwezinto ezizinzileyo okanye isiseko somthi ukuze kuphuculwe inkangeleko kunye nomgangatho wazo. Ubushushu, izinto ezincamathelayo kunye noxinzelelo zihlala zisetyenziselwa ukunamathela ii-laminates kwi-substrate. Ezinye izinto eziqhelekileyo ezisisiseko seengcango zekhabhathi elaminethiweyo yiplywood eyomeleleyo okanye ibhodi yokuhamba elwandle.
IiLaminates nazo zineentlobo ezimbini, ii-laminates zoxinzelelo oluphezulu kunye neelaminates zoxinzelelo olusezantsi. Iilaminates zoxinzelelo oluphezulu zihlala zomelele kwaye zinganyangeki kumonakalo. Amandla abo athelekiswa netafile yomelele. I-laminates ephantsi koxinzelelo, kwelinye icala, azomelele kangako kwaye zinotyekelo lokuqhekeka okanye ukuqhekeka ngokulula.Iza kwiindidi ezimbalwa zemibala xa kuthelekiswa ne-laminates yoxinzelelo oluphezulu. Iilaminates eziphantsi koxinzelelo nazo zenziwe nge-melamine. Xa ukhetha ukugqitywa kwe-laminate efanelekileyo kwikhabhinethi yakho yekhitshi, qiniseka ukuba uhambe kunye ne-laminates eziphezulu njengoko zihlala zihlala ixesha elide. Olona hlobo ludumileyo lwee laminates zoxinzelelo oluphezulu yiFomica.
Ngaphandle kwe-aesthetics ethi ii-laminates zinegalelo kwiikhabhathi zasekhitshini, zinika ezinye izibonelelo. Le yenye yezona ndlela inexabiso lokukhetha izinto zokugqiba kwikhabhinethi. Ayisebenzi, iyamelana nokubuna kwaye inokumelana nokusetyenziswa okunzima. Kwaye ekubeni isetyenziswa kwimakhishithi, imibala yeekhabhathi zakho kunokwenzeka ukuba zinxitywe kwaye zide zithelekiswe nezinye izinto ezigqityiweyo ezifuna ukufaka isicelo okanye ibrashi yokugquma.
Imitshato ehamba ezantsi
Imibala eyahlukeneyo, iipateni kunye nokuhombisa okubonelelwa ngamalaminethi kwenza ukuba amathuba okuyila angapheli, avumela abaninikhaya ukuba basebenzise nakweyiphi na indlela yoyilo ekhitshini. Uhlobo olwahlukileyo lwee laminates kukugqitywa kweenkuni, okulinganisa ukubonakala kwento yokwenene, yemithi yendalo.
Iikhabhathi zeKhitshi ezingagqitywanga- Umthi ngokwawo mhle ngokwendalo kwaye endaweni yokuwugqiba, abanye bakhetha ukujonga okuluhlaza ngakumbi nangokwemvelo. Iingcango zekhabinethi ezingagqitywanga zinika ubumdaka bendalo kunye nobushushu, obumema ubume kwiindawo. Ifanele useto lwekhitshi ngokwesiko lendlu yefama, isitayile selizwe kunye nesitayile se-rustic.
Olunye uhlobo lweenkuni ezithandwayo ezibonakala zintle ngokungagqitywa yicherry, imaple, i-oki, i-hickory kunye nepine. Imithi engaqhelekanga efana ne-ebony, mahogany kunye ne-bamboo ikwanombala okhangayo kunye nomzekelo wokugaya onokuboleka umdla okhethekileyo ekhitshini. I-Cherry luhlobo lweenkuni oluqheleke ukuba lusetyenziselwe ukujonga okungagqitywanga ngenxa yobomvu balo bendalo ukuya kumdaka onzulu obomvu.Ungafunda ngakumbi ngemibala yendalo yale mithi njengoko siqhubeka neli nqaku.
Iingcango zekhitshi ezingagqitywanga zinoqoqosho kakhulu kwaye zibiza malunga ne- $ 5- $ 50 kwisiqwenga. Ingathengwa sele yenziwe kwivenkile zokuphucula ekhaya.
Ukugqiba ngokwesiko - Ngaphandle kwoluhlu olubanzi lweendlela zokugqiba ezichazwe apha ngasentla, iikhabhathi zasekhitshini zinokugqitywa ngokwesiko. Ukugqitywa kwesiko kusetyenziswa ngesandla kusetyenziswa ibhrashi ye-roller, emva koko unikwe idyasi ephezulu. Ukugqitywa kwekhabinethi yesiko kuvumela abaninimzi ukuba benze uyilo oluhambelana ngokugqibeleleyo nokhetho lwabo kwisitayile. Abanye abavelisi banokulinganisa umbala wakho wepeyinti owuthandayo ukwenza ukugqitywa kwekhabinethi enyanisekileyo. Ukugqitywa kwesiko kunye nombala wekhabhathi zasekhitshini zixubene ngabavelisi kwaye zithunyelwe kumninikhaya ukuze zamkelwe, zivumela ukhetho olungenasiphelo ekuxubeni nasekufaniseni xa kufikwa kuyilo lwekhitshi.
Iikhabhathi zasekhitshini ngokwesiqhelo zenziwe ngomthi onzima. Ubuhle obahlukileyo bomthi kunye nobungqongqo bendalo kunye nomtsalane wokuba negalelo kwizithuba zenza ukuba zithandwe ngabaninimzi abaninzi kunye nabayili ngokufanayo. Ngaphandle kokubukeka okumangalisayo kwe-aesthetics ethi ikhabethe yokhuni inegalelo ekhitshini, ezinye zeempawu zayo ezibonakalayo kubandakanya ukuhlala ixesha elide, ukwenza ngokwezifiso okuphezulu, ukuguquguquka kunye nokuguquguquka.
Ukugcina iindleko, ezinye iindlela ziye zenziwa. Izinto zekhabinethi ezifana ne-veneers kunye ne-laminates ziveliswa ukulinganisa ukubonakala kweenkuni, kungenjalo, ezi zinto zisetyenziswa kumhlaba ongaphantsi njengeplywood, i-MDF okanye ibhodi yamasuntswana. Nangona kunjalo, abanye abantu bakhetha eyona nto iyiyo kwaye baya kwikhabhathi yekhitshi eqinileyo.
Umthi uneentlobo ezininzi kwaye ayizizo zonke iintlobo ezifanelekileyo ukusetyenziswa njengekhabhathi yekhitshi. Kuba amakhitshi ahlala ephantsi kokusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nokufuma, izixhobo zekhabinethi yekhitshi kufuneka zomelele kwaye zomelele. Umthi unotyekelo lwendalo lokuluka, ukubola kunye nokubola ngokuhamba kwexesha kwaye ukuthintela oko, uphantsi konyango ngaphambi kokusetyenziswa. Ukwenza uyilo lwekhabhathi oluhlala ixesha elide ekhayeni lakho, kubalulekile ukuba wazi iziseko ezimbalwa ngokubhekisele kwiintlobo ezahlukeneyo zomthi ezinokusetyenziselwa esi sicelo.
Nazi iintlobo ezithile zeenkuni ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini:
Itsheri -I-Cherry yenye yezona ntlobo zithandwa kakhulu ngomthi kwaye lolona hlobo luhle kakhulu lweenkuni kwiikhabhathi zasekhitshini, ngakumbi useto lwesiNtu. Umbala wayo ocacileyo obomvu krwe omdaka ngombala kunye neepateni ezintle zokugaya zinika ubutyebi kunye nokunethezeka emakhitshini. Olunye uphawu olwahlukileyo lwenkuni yecherry kukuba indala ngobumnandi njengoko imibala itshintsha ibe ziithoni ezahlukeneyo ngokuhamba kwexesha, inikezela ngeenkangeleko ezahlukeneyo kubomi bayo bonke.
Ngaphandle kobuhle bayo obumangalisayo, icherry nayo yomelele kakhulu kwaye iyakwazi ukumelana nokukrwela kunye nokungqongqoza. Nangona ifunyanwa ngokuxhaphakileyo kwiikhitshi zesintu ezinje ngeengcibi zesitayile seCraftsman okanye iikhitshi zelizwe, iikhabhathi zekhitshi zekhitshi zinokusetyenziswa nakwiseto zangoku kusetyenziswa uyilo lwekhabhathi olufanelekileyo kunye nomsebenzi wokugaya. (Ndwendwela eyethu iikhabhathi zekhitshi zekhitshi igalari yoyilo ngakumbi.)
Imephu -Imephu ngumthi ombala okhanyayo onepateni ecolekileyo yokugaya. Unombala omhlophe ubukhulu becala, kodwa umahluko wenza uluhlu lwethoni emhlophe ecekeceke ukuya ngaphantsi nangaphantsi ebomvu. Ngokubanzi, iikhabhathi zekhitshi zomthi weplanga zinezixhobo ezigudileyo, ezifanayo. Olu hlobo lomthi lufuna kuphela ibala elicacileyo okanye ukugqitywa kwendalo ngenxa yombala wokukhanya ocacileyo. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeenkuni, kubiza kakhulu. Imephu isetyenziselwa izinto ezinesiko kunye nekhabhathi yekhitshi yesiko kwaye ilungele iintlobo ezahlukeneyo zoyilo lwekhitshi kubandakanya isitayile sangoku.
Iphayini -Ipayini luhlobo lomthi othambileyo othengisa umbala omthubi. Yiyo kuphela iindidi zemithi ethambileyo esetyenziselwa ikhabhathi yekhitshi. Ngokungafaniyo nemithi elukhuni, ipayini ngokulula isenza kube nzima kodwa ihlala inyanzeliswa ukuze kuqiniswe amandla kunye nomgangatho wayo. Iindidi eziqhelekileyo zepine ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini ziipine ezimhlophe zaseMpuma kunye nephayini emhlophe yaseNtshona. Ipayini inokudyobheka ukufezekisa umbala owahlukileyo kwaye ukubonakala kwayo okungafaniyo kubandakanya amaqhina. Iikhabhathi zekhitshi elinepine zihlala zisetyenziselwa useto olunobuntu bendabuko kunye nelizwe eliqaqambileyo.
Oak - I-oki ngokubanzi, inombala ohlukileyo ovela kumhlophe ubomvu, iithoni ezipinki. Eminye imithi ye-oki ikwanemigca emthubi, eluhlaza kunye emnyama. Oku kungenxa yobukho beemigodi ezigcinwe emthini. Iindidi ezimbini ze-oki ezisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi yi-Red Oak kunye ne-White Oak.
I-Oak ebomvu - I-oki ebomvu luhlobo lomthi wom-oki onombala ophantsi obomvu krwe otyheli. Umzekelo wayo wokugcoba ubonakala ngakumbi. Iyaziwa ngokuzinza kwayo kunye namandla ayo. Olunye uncedo lom-oki obomvu kukuba ayibizi xa kuthelekiswa neminye imithi. Olu hlobo lweenkuni luqhele ukusetyenziselwa isitayile sendabuko iikhabhathi zasekhitshini. Ifumaneka kuluhlu olubanzi lweendlela kwaye igqityiwe kwaye isetyenziselwa isiko, isiko elenziweyo kunye nekhabhathi yesitokhwe.
Um-oki omhlophe - I-oki emhlophe lolunye uhlobo lomthi we-oki, kodwa xa kuthelekiswa ne-countertop yayo ebomvu, le inepateni ecekeceke ngakumbi yombala kunye nombala wegolide ngakumbi. Ikomelele kwaye yomelele ngakumbi xa kuthelekiswa ne-oki ebomvu. Olu hlobo lweenkuni luhlala lusarhwa ngekota xa lusetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi. Umbala ofudumeleyo uyenza ilungele izitayile zasekhitshini zemveli, ngakumbi iikhitshi zesitayile soMsebenzi. I-oki emhlophe ihlala inikezelwa kuphela njengezinto ezinokwenziwa ngokwesiko kwikhabhathi yekhitshi.
Uthuthu - I-Ash luhlobo lomthi olubonakala ngombala okhanyayo kunye nephethini ebonakalayo ethe nkqo. Inokomelela ngokufanayo kunye namandla kwi-oki. Umbala wendalo ulungele kakhulu useto lwangoku lwekhitshi. Olu hlobo lweenkuni aluqhelekanga kwaye lufumaneka kuphela kwiikhabhathi zasekhitshini.
Ukunyusa - IHickory inepateni efanayo yokugcoba kwi-oki, kodwa umbala wayo ukhaphukhaphu. Olu hlobo lomthi luphawulwa ngombala wendalo ococekileyo, otyheli. Nangona inamabala, i-hickory inyangwa ngcono ngebala elicacileyo okanye ivanishi yendalo ukuze ibalaselise iithoni zayo ezimhlophe. Xa kuziwa kumandla, i-hickory ifaniswa ne-oki. Olu lukhetho oludumileyo lweekhitshi eziphefumlelweyo ze-rustic kwaye zihlala zisetyenziselwa isiko kunye nekhabhathi yekhitshi yesiqhelo.
Birch - I-Birch luhlobo lomthi ocoliweyo ocoliweyo onombala omnyama kancinane kune maple. Iyomelele kwaye iyakwazi ukumelana nokuwohloka kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Enye yezona mpawu zixabisekileyo zomthi we-birch kukuba kuthatha ukugqitywa kakuhle. Ukunikezela ngokuguquguqukayo kunye nokuguquguquka ngokwemeko yesicelo, iinkuni ze-birch zinokungcoliswa okanye ziphathwe nge-faux finishes ukuze kufezekiswe ukujonga okubiza kakhulu. Usebenzisa uhlobo olufanelekileyo kunye nombala wokhuni lwamaplanga, iinkuni ze-birch zinokudlula ngokulula njenge-cherry okanye imephu. Nangona kunjalo, ukusebenzisa ibala leenkuni kwi-birch kufuna ukhathalelo olongezelelekileyo kuba kuthambekele kumbala ongaqhelekanga. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeenkuni, i-birch ayibizi kakhulu.
Ubudala - I-Alder luhlobo lomthi olunobunkunkqele kunye nokuthelekiswa okuthe nkqo. Lubonakala ngombala omdaka okhanyayo kunye nelizwi eliphantsi elibomvu. I-Alder wood iqulethe iziphene zendalo ezinje ngemingxunya yeepini, amaqhina, iintanda zeentaka kunye nemigca yezimbiwa. Zizonke zidibene zenza ifomathi eyahlukileyo, enobubele. Ipateni ebalaseleyo yokudibanisa iikhabhathi zekhitshi le-alder zibolekisa ubutyebi ekhitshini. Ilungele ngokufanelekileyo useto oluphefumlelweyo lwe-rustic.
Walnut -IWalnut inombala omdaka othululweyo kunye nephethini egudileyo, nokuba intle. Umphezulu wayo ngokubanzi uzaliswe ziinkozo ezichanekileyo ezisusela kumbala omdaka ngombala obomvu ongwevu ukuya kwimingxunya yetshokholethi enzulu. Olunye lweempawu ezibalaseleyo zelnut kukuba indala ngobabalo, ijika ibe ngumbala mellow ngokuhamba kwexesha. UWalnut ubonelela ngemfudumalo kwiindawo zasekhitshini kwaye zilunge kakhulu kwiintlobo ezahlukeneyo zezitayile zoyilo, nokuba inokuba yeyesiko, yotshintsho, yanamhlanje okanye yanamhlanje.
Olunye uhlobo lweekhabhathi ezenziwe ngokwesiko sele zilungile iikhabhathi zenziwe. Olu luhlobo olufanelekileyo lwekhitshi labanini bamakhaya abafuna ukhetho olulula nolungabizi kakhulu.
Ukulungiselela iikhabhathi zasekhitshini sele zenziwe okanye zihlanganisiwe iikhabhathi ezilungele ukufakwa. Xa kuthelekiswa nekhabhathi yekhitshi eyenziwe ngokwezifiso ezakhiwe kwindawo leyo, olu hlobo lweekhabhathi luphinda lwenze, lusike kwaye luhlanganise inkqubo kumzi-mveliso okanye Ivenkile. Ifuna ixesha elincinci ukuyifaka. Kukho iivenkile ezininzi ezijolise kolu hlobo lwekhabhathi zasekhitshini kwaye ziyafumaneka kwiivenkile zokuphucula ikhaya, ngelixa ezinye zikwabonelela nge-Intanethi.
Ukulungele ukudibanisa iikhabhathi zasekhitshini okanye iikhabhathi ze-RTA ziza kwiibhokisi, ziqulathe zonke izinto zazo, izixhobo zekhompyutha kunye nemiyalelo yokuhlangana. Ukulungiselela iikhabhathi zasekhitshini ziyafumaneka zigqityiwe okanye zingekagqitywa.
Ukulungele ukwenza iikhabhathi zasekhitshini zinika uncedo olukhulu kunye nokonga ngokwexabiso. Zingabizi kakhulu kunesiko kunye nekhabhathi yekhitshi yesiko. Nangona kunjalo, enye yeengxaki zayo kukuba inenani eliqingqiweyo lesitayile kunye nemibala.
Olunye uhlobo lokulungela iikhabhathi zasekhitshini ziimodyuli zekhitshi. Olu hlobo lwekhabhathi zasekhitshini ziyafumaneka kwimibala ebanzi yemibala, izitayile, uyilo kunye nezinto. Izinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini esele zilungile zenziwe ngeplywood kunye ne-MDF okanye ifreyibodi yokuxinana okuphakathi koxinzelelo oluphezulu laminate. Abanye abathengisi bakwanikezela ngeekhabhathi ezifakwe kwiglasi.
Uku-odola iinkqubo zekhitshi esele zilungile kunye neemodyuli zasekhitshini kubandakanya inkqubo ecwangcisiweyo kodwa elula. Kuqala, umenzi uthatha imilinganiselo yokwenyani yendawo esele ikhona ekhitshini. Emva kokuthatha imilinganiselo, bathatha abaninikhaya ukhetho kwisitayile, uyilo kunye neemfuno zesithuba. Abavelisi emva koko baqhubeka nokwenza izindululo zoyilo kunye nolwakhiwo lwekhitshi ngokusekwe kwimilinganiselo yokwenene yendawo. Nje ukuba kuvunyiwe, iikhabhathi zasekhitshini zenziwe kwivenkile okanye kwimveliso yokuvelisa kusetyenziswa izinto ezikhethwe ngumninikhaya kunye nokugqiba. Nje ukuba inkqubo yemveliso yenziwe, iikhabhathi zasekhitshini zisiwe kwaye zifakwe kwisiza. Ngokwesiqhelo, abathengisi bafuna ixesha elikhokelayo loyilo kunye nenkqubo yokuvelisa.
Iimodyuli abathengisi bekhabhathi yekhitshi banamagumbi okubonisa abonisa iisampulu zomsebenzi wabo kunye neemodeli zokwenyani zekhitshi. Oku kuvumela abathengi ukuba bafumane umbono wokuba iimveliso zabo zibukeka njani kwinqanaba lokwenyani. Ukongeza koku, abathengisi abasele besenziwe ekhitshini bavumela abathengi ukuba bakhangele iisampulu zabo ezibonakalayo zokugqiba kunye nemibala yezinto zekhabinethi kunye neetafile ngokunjalo. Ngaloo ndlela, umthengi unokufumana ngokupheleleyo ukuqonda, ukuthungwa kunye nokubonwa kwezixhobo zekhabinethi yasekhitshini.
Abanye abathengisi bekhabhinethi yemodyuli bakwabonelela ngezixhobo zokuhamba kunye neesistim zabo zeemodyuli. Oku kubandakanya iibhasikiti zocingo, iitreyi zesitya, imigqomo yenkunkuma, iicarousels kunye nokukhupha. Ukulungiselela iikhabhathi zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo kunye nezixhobo. Iindlela ezisusela kwiihenjisi, ukuphuma, iihenjisi zamanzi, njl. Njl. Njl., Izixhobo zekhabhathi kunye neqhina, kwelinye icala, zinikezelwa ngokugqitywa okwahlukeneyo kunye nezitayile, njengokugqitywa kwesinyithi, ukugqitywa kwesatin okanye ukugqitywa kwe-chrome.
Zintathu izinto eziphambili onokukhetha kuzo kwikhabhathi yekhitshi ezizezi: Isiko elingumlinganiso, isiko kunye nekhabhathi zekhitshi lesitokhwe. Isishwankathelo, iikhabhathi zasekhitshini zesiko zenziwe ekuqaleni ngokweemfuno ezithile zomninikhaya. Iikhabhathi zekhitshi lesitokhwe, kwelinye icala, ziyilo zilungile kwaye zithengiwe njengoko zinjalo. Ngelixa iikhabhathi zasekhitshini eziqhelekileyo zidibanisa zombini ezi ntlobo njengoko zivumela abanini khaya ukuba bahlengahlengise kwaye benze ngokwezifiso uyilo lwesitokhwe esinikiweyo.
Phakathi kweendidi ezintathu zoyilo lwekhabhathi yekhitshi, iikhabhathi zekhitshi lesitokhwe zibiza kakhulu. Ngokuyintloko kuba, zithengiwe ngesiseko, oko kuthetha ukuba ayinakuguqulwa, yenziwe ngokwezifiso okanye itshintshwe. Kucatshangelwa njengoluhlobo olulula lwekhabhinethi yekhitshi.
Iikhabhathi zekhitshi esitokhwe zithengiswa kuyilo esele lwenziwe olupeyintiweyo, olwenziwe kwangaphambili nolugqityiweyo. Iyafumaneka kuluhlu olubanzi lweendlela, imibala kunye nokugqitywa. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nesiko kunye nekhabhathi zasekhitshini zesiko, uyilo lwayo lilinganiselwe kwaye awufumani inkululeko epheleleyo yoyilo lwekhabhathi yakho yasekhitshini. Ngekhabhathi zekhitshi lesitokhwe, kuya kufuneka waneliswe zizinto ezikunika umthengisi. Kodwa ngaphandle koku, iikhabhathi zekhitshi zesitokhwe zibonelela ngeyona ndlela ifikelelekayo yokubonelela ngendawo yekhitshi.
Iikhabhathi zasekhitshini ezinesiko lokuthengisa zithengiswa ngokobungakanani bekhabhathi esisiseko okanye esemgangathweni, kodwa ngokungafaniyo nekhabhathi zekhitshi lesitokhwe, abathengi kunye nabanini bamakhaya bavunyelwe ukuguqula imilinganiselo yeekhabhathi, iidrowa kunye neengcango. Oku kukwavumela abaninimzi ukuba babandakanye incasa yabo yobuqu kwikhabhathi yabo yasekhitshini.
Njengeekhabhathi zekhitshi zesitokhwe, iikhabhathi zasekhitshini eziqhelekileyo zenziwe ngobuninzi. Iikhabhathi zasekhitshini ezinesiko ezifumanekayo ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Iikhabhathi ezisemgangathweni zekhitshi zinokuhonjiswa ngeenkcukacha ezongezelelekileyo njengokubumba, ukuhombisa okulungiselelwe okroliweyo kunye nezimbo. Abanini bamakhaya banokukhetha ukuba yeyiphi na into abaza kuyisebenzisa, loluphi ucango lwekhabhathi oza kulusebenzisa kunye nohlobo lombala kunye nokugqiba abakukhethayo.
Olona ncedo luphambili lweekhabhathi zekhitshi zesiko kukuba bavumela abaninimzi ukuba basebenzise ubuchule ekuzilungiseleleni nasekulungiseni iikhabhathi zabo zasekhitshini, ngaphandle kokuchitha kakhulu. Xa kuthelekiswa nokukhetha iikhabhathi zasekhitshini, zibiza kakhulu. Uhlengahlengiso olwenziweyo kwiikhabhathi zasekhitshini zesiko zilala notshintsho kwisitayile somnyango, umbala, izixhobo kunye nezixhobo, zonke zivumela ubhetyebhetye ngokoyilo, ngaphandle kwesidingo sexesha elide lokukhokela. Iinkcukacha ezongezelelweyo, nangona kunjalo, zibiza iindleko ezongezelelweyo kwaye kungathatha ixesha elide ukuvelisa. Enye indlela esebenzayo yokulawula iindleko kwiikhabhathi zasekhitshini eziqhelekileyo kukukhetha ikhabhathi esemgangathweni kwaye uyenze ngokwezifiso kunye nezixhobo ezizodwa.
Iikhabhathi zasekhitshini zesiko zakhiwe ukusuka ekuqaleni ngokweemfuno ezithile zoyilo kunye nokubalulwa komninikhaya. Olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi lwenziwe uku-odola. Ngeekhabinethi zesiko zasekhitshini, akukho zixhobo ziphinda zakhiwe okanye zihlanganiswe ngaphambili, yonke into iyasikwa, yenziwe ngobugcisa kwaye yahlanganiswa ngesandla. Ezi zinto zakhiwa ngamagcisa anobuchule, abachweli kunye nabenzi bekhabhathi.
Zininzi izinto eziluncedo kwiikhabhathi zasekhitshini zesiko. Isibonelelo esiphambili esibonelelweyo kukuba banika ukuguquguquka kunye nokusebenza ngokuchaseneyo ngokoyilo. Abanini bamakhaya banenkululeko epheleleyo yokukhetha kunye nokuguqula umbala wekhabhinethi yabo, izinto, ukugqiba, uyilo kunye nesitayile. Iikhabhathi zasekhitshini ezenziwe ngokwezifiso zenzelwe ukuxhomekeka kwiimfuno zomninikhaya kunye neemfuno. Ingenziwa nakweyiphi na ubungakanani, ubunzulu, ubude nobubanzi, kusetyenziswa nasiphi na isixhobo okanye ukugqiba, okuhonjiswe nangayo nayiphi na into eyongezwayo. Iikhabhathi zasekhitshini zesiko zinokwenziwa ukuba zilingane kwiindawo ezinomceli mngeni, nokuba yeyiphi na indlela esele ikho okanye ukuseta ikhitshi lakho.
Ukongeza kwinkululeko yokuyila, iikhabhathi zasekhitshini zesiko zinokulingana nayiphi na indlela yoyilo nokuba yeyesiko okanye yeyangoku. Kwaye ekubeni unenkululeko yokukhetha, ungaqinisekisa ukuba izinto ezisetyenziselwa iikhabhathi zihlala ixesha elide, zithembekile kwaye zihlala ixesha elide.
Nangona kunjalo, ukuba ukhetha ukukhetha iikhabhathi zasekhitshini ekhaya lakho, qiniseka ukuba ujonga ezi zinto zilandelayo. Okokuqala lixesha lokukhokela, njengoko iikhabhathi zasekhitshini zesiko zithatha ixesha elide ukuvelisa kunye nokufaka. Okulandelayo kukuba kufuna isicwangciso esilinganiswe ngokuchanekileyo sendawo ekhoyo yekhitshi njengoko ubungakanani beekhabhathi zekhitshi zesiko ziya kuxhomekeka ngokupheleleyo kuyo. Okokugqibela, jonga uhlahlo-lwabiwo mali, njengoko iikhabhathi zasekhitshini zesiko ziza nexabiso eliphezulu.
Iindleko eziphezulu zeekhabhathi zekhitshi zesiko nazo zithathwa njengeyona nto ibalulekileyo. Ngokwendleko, iikhabhathi zasekhitshini zesiko ziwela phantsi komgangatho ophezulu. Kuba yonke into yeekhabhathi zasekhitshini zesiko zenziwe ngesandla ukusuka ekuqaleni, iindleko zomsebenzi wolwakhiwo kunye nofakelo zithatha isixa esikhulu sebhajethi yeprojekthi iyonke. Abenzi beKhabhinethi kunye neengcweti badla ngokunika ixabiso eliqengqelekileyo ngobuchule babo, kwaye kunye nobugcisa babo obugqwesileyo, kuqeshwa izinto ezikumgangatho ophezulu ukugqibezela umsebenzi.
Iikhonkco zekhabinethi yasekhitshini, ukutsala kunye nokuphatha ziimpawu ezisetyenziselwa ukuvula nokuvala iikhabhathi. Ngaphandle kokusebenzisa ngokwendalo, ezi zinto ziluncedo zisetyenziselwa ukwandisa isibheno sobuhle sekhabhathi yakho yasekhitshini njengezinto zokuhombisa, izixhobo zekhabhathi zekhitshi zinokusetyenziswa njengezivakalisi okanye njengokuhombisa okuhlobisayo kwisitayile sekhabhinethi yakho yonke.
Kukho inani elingenasiphelo lezinto onokukhetha kuzo xa kufikwa kwizixhobo zekhabinethi yekhitshi. Ingenziwa ngesinyithi, iplastiki, ukhuni, i-ceramic, ngelixa ezinye zibandakanya umxube onomdla walezi zinto ukubonelela ngokuhombisa ngakumbi. Ngaphandle kwezinto ezahlukeneyo, izixhobo zekhabhathi yekhitshi nazo ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo ezinokutshatisa naluphi na uhlobo loyilo lwekhitshi. Ikwafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo zemibala, ukugqitywa kunye nobukhulu.
Iindidi zezixhobo zekhabhathi zekhitshi
Izixhobo eziqhelekileyo zekhabhathi yekhitshi zinokuhlelwa ngokwamaqela amathathu ngokubanzi, angala, amaqhina, ukutsala okanye ukuphatha kunye nendebe kunye nemigqomo yokutsala.
Iikhonkco -Iikhonkco zeKhabinethi zithathwa njengoluhlobo olulula lwezixhobo zekhabhathi kuba zezona kulula ukuzifaka. Iikhonkco zeKhabinethi ziqhotyoshelwe kwiminyango yekhabhinethi yasekhitshini kusetyenziswa isikere esinye kuphela. Ikwafumaneka njengeqhekeza elinye le-chic liza nokwakhiwa ngezikere kunye neziqwenga ezibini ezinokuqina okwahlukileyo nangaphezulu.
Amaqhina ekhabhinethi ngokubanzi angumjikelo arawundi kodwa anokuba sisikwere, uxande okanye idayimane. Ezinye iimilo ezithandwayo zamaqhina ekhabhinethi zibandakanya i-mushroom, i-oval, ibha, ikristale kunye nezinto ezintsha. Ezinye izinto eziqhelekileyo zamanqwanqwa ekhabhinethi zibandakanya isinyithi esifana nobhedu, i-zinc, i-die cast, i-stainless steel kunye ne-bronze. Ukongeza kwezi zinto, abathengisi bakwenzile amaqhina ekhabhathi kwiglasi okanye ngekristale, ilitye, ukhuni, i-ceramic okanye iplastiki.
(Jonga le khonkco yekhabinethi ekhitshini IAmazon )
Ukutsala kunye nokuPhatha - IKhabinethi iyatsala okanye iphathe ngokuyintloko inezinjongo ezifanayo nezamaqhina, kodwa inkulu ngobukhulu kwaye iphakamile ngohlobo. Ezi ziqhotyoshelwe kwiikhabhathi zisebenzisa izikrufu ezibini, kodwa ezinye uyilo zinokufuna ngaphezulu. Ubungakanani obuqhelekileyo bekhitshi ekhitshini etsala zii-intshi ezine ubude, kodwa oku kunokuya phezulu. Ukutsala okude okanye okugqwesileyo kwikhabhinethi kuqhelekile ukuba kusetyenziswe kwizitayile zangoku kunye nezangoku.
Kuyafana nakwiikhabhathi zekhabinethi, ikhabethe etsala kwaye iphatha ngokwesiqhelo, yenziwe ngesinyithi kodwa inokusebenzisa ezinye izinto ezinje ngomthi, iplastiki okanye iiceramic. Ezinye zeentlobo zazo eziqhelekileyo kukutsala ngomnwe, izibambo ezifihliweyo, ukutsalwa kwendebe, isiphatho sokulahla, ukutsala okujikelezayo, ukurhola iringi, izibambo zebar, ikheyi yeentaka kunye nesixhobo. (Jonga le bar yentsimbi engenamatshini IAmazon )
Xa kufikwa kufakelo, ikhabinethi iyatsala kwaye iphatha ukusebenzisa iziko ukuya kumlinganiso weziko, okuthetha ukuba umgama wokuqala wokujija ukuya kwiscrew sesibini uthathwe kumaziko abo. IKhabinethi iyatsala kwaye izibambo zingafakwa kwikona esezantsi yomnyango okanye zixhonywe embindini ngokuthe nkqo. Nangona ingaqhele ukusetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini, izibambo zekhabinethi zinokuxhonywa embindini wenxalenye ephezulu okanye ezantsi yomnyango, ngokuthe tye. Indlela oyifaka ngayo iya kuxhomekeka kakhulu kukhetho lwakho lobuhlobo kwisitayile.
INdebe kunye neBin Pulls - Indebe kunye nemigqomo yokutshixa eneneni iseti yolawulo lwekhabhathi kunye neziphatho, kodwa ezi zifumaneka ikakhulu kwiidrowa. Ezi zihlala zibizwa ngokuba kukutsalwa kwemigqomo okanye ukutsalwa kwesiqingatha senyanga ngenxa yesimo setyhula.
Xa kuthelekiswa nezibambo zekhabhinethi, ukutsalwa kwendebe kunokuvulwa kuphela kwicala elinye. Oku kungenxa yendlela eyahlukileyo yokubumba kunye nendlela yokufaka, apho emazantsi okutsala kuvulekile kwaye umphezulu uvaliwe. Ukuphakanyiswa ngesiphelo esivulekileyo sijonge ezantsi, iikomityi zitsalwa zibanjiwe ngaphantsi kwaye zitsalwe ukuvula idrowa. Ubuhle babo obukhethekileyo bunikezela ngenkangeleko entsha kwimizobo yendabuko. (Jonga le ndebe ye-nickel ye-satin IAmazon )
Iindidi zekhompyuter zekhompyuter oza kuzisebenzisa kuxhomekeke kwisitayile
Ngaphandle kobungakanani bayo, ikhabinethi iyatsala kwaye izibambo inegalelo elikhulu ekubonakaleni kwekhabhinethi yakho yasekhitshini. Xa ucwangcisa uyilo lwekhitshi lakho, iinkcukacha kunye nezixhobo kubaluleke kakhulu ngokulinganayo. Ezi zixhobo zihlala zithathwa njengezacholo ekhitshini kuba zinokukhulisa kakhulu ukubonakala kweekhabhathi zakho.
Ngaphandle kweprofayili, imilo kunye nesitayile sekhabhathi yentsimbi, umbala wayo kunye nokugqitywa kwayo yenye yezinto eziyilo ekufuneka umntu azithathele ingqalelo xa ukhetha izixhobo zekhabhathi ezifanelekileyo zekhabhathi yakho yasekhitshini. Ukugqitywa okuqhelekileyo kwezixhobo zekhabinethi kukugqitywa kwe-nickel, ukugqitywa kwe-satin, ukugqitywa kwe-chrome, i-antique pewter, ubhedu olukhanyayo okanye ubhedu obumnyama, ubhedu, i-bronze ye-rubbed, i-aluminium, i-matte emnyama, i-rust, iglasi ecacileyo, ukugqitywa komthi okanye umhlophe. Ezi zigqityiweyo zingasebenza njengesikhokelo sokuxuba kunye nokudibanisa nekhabhathi yakho yasekhitshini.
Ukukhetha izixhobo ezifanelekileyo zekhitshi lekhitshi ngumcimbi wokhetho lomntu. Akukho mthetho ulukhuni malunga nento onokuyisebenzisa, kodwa enye indlela esebenzayo kukukhetha ngokusekwe kwisitayile esikhoyo ekhitshini lakho. Ukugcina isitayile esingqongqo kwiikhabhathi zasekhitshini, izinto, izixhobo kunye neempawu kuqinisekisa uyilo olulungeleleneyo noludibeneyo.
Nazi ezinye zezinto eziqhelekileyo zekhabinethi ezigqityiweyo kunye nezitayile zekhabinethi ezidityaniswe kakuhle nazo.
Brass olukhazimlisiweyo Ubhedu olukhazimlisiweyo lunombala ofanayo negolide. Unombala odlamkileyo obangela ukuqaqamba kunye nokuhlaziya iikhikhini. Olu hlobo lwesiphelo sekhabhathi yentsimbi lubonakala ngaphandle kulo naluphi na uhlobo lwezinto kunye nomphezulu.
Izitayile zisebenza kunye: Ebonakaliswa ngumbonakalo oqaqambileyo, i-hardware yekhabhinethi ye-bronze ephathekayo iyona mdlalo ohambelana nesitayela selizwe kunye neekhitshi eziphefumlelweyo. Kukulungele kakhulu ukukhanya kunye iikhabhathi zasekhitshini ezinemibala emnyama . Ikhabhathi yekhitshi enemibala eqaqambileyo kwaye enzulu ikwalungele olu hlobo lokugqiba njengoko yenza umahluko onomdla.
Ubhedu lweAntique - Ubhedu lwe-antique lunembonakalo endala xa kuthelekiswa nobhedu olukhazimlisiweyo. Olu luhlobo oluzinzileyo lwezixhobo zekhabhathi njengoko zenziwe ngezinto ezomeleleyo njengekristale ekhokelayo kunye nepewter. Xa kuthelekiswa nobhedu olukhazimlisiweyo, ubhedu lwe-antique lunesibheno esingaphezulu.
Izitayile zisebenza kunye: Ebonakaliswa ngumbonakalo weklasikhi, i-antique yekhabethe yehardware ihamba kunye neendlela ezininzi zoyilo lwekhitshi, kodwa ziyafumaneka ngokufuthi kuseto lwasekhaya nakwiklasikhi enje ngesitayile selizwe. Ifanelekile kakhulu kwiikhabhathi zekhitshi ezinombala okhanyayo njengoko zivumela umbala wayo ukuba ubonakale.
Mnyama -Umnyama ngumbala othandwayo osetyenziselwa ukutsala kunye nokuphatha ikhabhinethi. Inika ukungathathi cala kunye nokusebenza ngokuchaseneyo ngokubhekisele kuyilo. Isixhobo sekhabhathi esimnyama sinokusetyenziselwa ukwenza ingxelo enesibindi ekhitshini, ngaphandle kokuba namandla. Ngokubanzi, izixhobo zekhabhathi ezimnyama zinesitayile kunye nembonakalo entle.
Izitayile zisebenza kunye: Uphawu lokujonga okucocekileyo, izixhobo zekhabhathi ezimnyama zihamba ngeendlela ezininzi zoyilo ekhitshini. Isetyenziswa ngokubanzi kulungiselelo lwesiNtu nakwelixesha, kwaye ifanelekile kwiikhabhathi ezimhlophe okanye ezikhanyayo zekhitshi njengoko zisenza umahluko.
Ukugqitywa kwezinto zakudala - Ukugqitywa kwe-antique endala kubonakala ngombala oyingqayizivele, obomvu obomvu. Olu gqibelo lunegalelo kwisibheno sexesha elifanelekileyo kunye nehlabathi elidala liziva kwikhabhathi yekhitshi. Ukugqitywa kwe-antique endala kungangqamana nokubunjwa kwesithsaba sekhabhathi yekhitshi ukuze kujongwe ngakumbi.
Izitayile zisebenza kunye: Ebonakaliswa ngumbala osekhulile kodwa ongapheliyo, i-hardware ye-antique ye-antique ehamba kunye neendlela zekhitshi zendabuko. Ngumdlalo ofanelekileyo wekhitshi ezinemibala ekhanyayo.
I-Chrome epholileyo -IChrome ekhazimlisiweyo ibonakaliswa ngombala oqaqambileyo wesilivere. Ukubonakala kwayo okuqaqambileyo kunegalelo kukhitshini. Olu hlobo lokugqitywa kwekhabhathi yekhitshi yasekhitshini ihlala ihambelana nezixhobo ezifanayo zokubonakala okufanayo.
Izitayile zisebenza kunye: Ebonakaliswa ngumtsalane onobuhle, wanamhlanje kodwa olondolozayo, izixhobo zekhabhathi zekhrimu ye-chrome ezisetyenzisiweyo zihlala zisetyenziselwa useto lwanamhlanje nolwanamhlanje. Ihambelana ngokugqibeleleyo nekhabhathi ekhanyayo kunye nemnyama, nkqu nezo zinepeyinti yokugqiba.
Nickel olukhazimlisiweyo -I-nickel ephothiweyo ithathwa njenge-chameleon ye-hardware hardware egqityiweyo. I-nickel ephothiweyo inombala ongaphantsi ngakumbi xa kuthelekiswa ne-chrome ebengezelelweyo nobhedu, kodwa ibengezela ngokuqaqamba. Olu hlobo lwesiphelo sekhabhathi sekhabhathi lunokusetyenziswa ukuba ufuna i-Hardware yakho idibane kunokuma endaweni. Olona ncedo luphambili lwekhabethe yentsimbi kukuqina kwayo okuphezulu, iNickel yenye yezinyithi ezinamandla, kwaye ukongeza kuloo nto ayina rusi.
Izitayile zisebenza kunye: Efaniswa nesibheno esihle, ikhabethe le-nickel elikhazimlisiweyo nayiphi na indlela yoyilo. Ijongeka intle ekhitshini eneenkcukacha zokuhombisa kakhulu kuba ithobile imbonakalo engakhuphisani nezinye izinto ezigqityiweyo kwisithuba. Isebenza nangawuphi na umbala wekhabhathi zasekhitshini kodwa izibini ezihamba phambili ngekhabhathi enombala omnyama.
Isilivere yeSatin I-satin yesilivere inenkangeleko ethambileyo xa kuthelekiswa neendidi ezigudisiweyo. Ayinayo inkangeleko ekhazimlayo, kodwa ixhomeke ngaphezulu kwe-matte, imbonakalo ebrashiweyo. Olu hlobo lwezixhobo zomdibaniso ludibanisa kakuhle izixhobo zentsimbi ezingenasici kwaye luyaziwa ngokuzinza nokuthembeka kwalo. Iminwe ayikhupheli ngokulula kwizixhobo zesilivere zekhabinethi yesilivere.
Izitayile zisebenza kunye: Ebonakaliswa ngumbala obumbeneyo, izixhobo zekhabhathi zesilivere zesatin zihlala zisetyenziselwa iikhitshi ezisebenzisayo. Olu hlobo lokugqitywa kwekhabhinethi yehardware luhlala lubhangqiwe kunye nekhabhathi enombala owenziwe ngokwahlukileyo.
Intsimbi yakudala -Ihardware yentsimbi yekhabhathi yentsimbi ibonakaliswa kukungafezeki okunika ukubonakala okunomdla ngakumbi. Ngaphandle kobunkunkqele, olu hlobo lwekhabhathi yentsimbi nayo yomelele. Umbala wayo obonakalayo kunye nembonakalo ivelisa iziphumo ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwimeko yokukhanya.
Izitayile zisebenza kunye: Ebonakaliswe sisibheno sayo se-rustic, izixhobo zentsimbi zekhabethe zentsimbi zihlala zisetyenziselwa iikhitshi zemveli eziphefumlelweyo ilizwe. Ingasetyenziselwa useto lwangoku ukuba ufuna ukufakela izitayile okanye ukongeza into encinci yokuhombisa. Olu hlobo lokugqitywa kwezixhobo zekhabethe zinokudityaniswa kunye nokukhanya kunye nekhabhathi emnyama.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo -Iqwalaselwe njengenye yezona zinto zisetyenziswayo kunye nokugqitywa kwezixhobo zekhabhinethi, intsimbi engenasici yomelele kwaye yomelele kakhulu. Unombala obukhali obonelela ngenkangeleko ecocekileyo.
Izitayile zisebenza kunye: Ebonakaliswa yi-aesthetics yayo ebukhali, i-hardware yekhabhinethi yensimbi engenasici isetyenziselwa ukusetyenzwa kwekhitshi yanamhlanje kunye nexesha langoku. Olu hlobo lokugqitywa kwezixhobo zekhabethe zinokudityaniswa kunye nokukhanya kunye nekhabhathi emnyama, kodwa ime ngaphandle kwikhabhathi emnyama nekhanyayo ekhitshini. Kwakhona kukufezekisa ngokugqibeleleyo, umphezulu ogudileyo wekhabhathi ekhitshini ephezulu.
Umnxeba Chrome -I-Nickel chrome inembonakalo ye-matte kwaye umbala wayo umnyama kune-nickel ecoliweyo.
Izitayile zisebenza kunye: Ebonakaliswa ngumbala wayo othulileyo kunye ne-aesthetics ephucukileyo, i-nickel chrome yehardware yehardware zihlala zisetyenziselwa useto lwasekhitshini lwakudala kunye ne-rustic. Olu hlobo lwesiphelo sekhabhathi yentsimbi lusebenza ngokugqwesileyo okanye ngombala okhanyayo kuba ludala umahluko. Imvelaphi yokukhanya ivumela umbala we-nickel chrome ukuba ubonakale.
Ikhabhinethi yekhitshi luhlobo lwebhokisi njengokugcina kunye nomnyango wangaphambili oqhotyoshelweyo. Kodwa ngaphandle kweminyango, kukho ezinye izinto ezininzi ezenza ikhabinethi yekhitshi.
Ikhabhathi yekhitshi inokwahlulwahlulwa ibe ziinxalenye ezimbini ngokubanzi: umphambili wekhabhathi kunye nesidumbu sekhabhinethi okanye ibhokisi. Umphambili wekhabhinethi wenziwe ngobuso, isakhelo, iingcango kunye neefreyimu. Ibhokisi yekhabinethi okanye isidumbu, kwelinye icala, senziwe ngeepaneli ezisecaleni, ngasemva, phezulu, ezantsi, iibhokisi zedrowa, ulwakhiwo lwangaphakathi kunye neshelfu.
Ubungakanani bezinto zekhabhinethi ziyahluka ngokuxhomekeke kumenzi kunye nomthengisi. Kodwa ngesiqhelo, izixhobo ezisetyenziselwa ezo zinto zinobukhulu obuqala ukusuka kwii-intshi ukuya kwii-intshi ze-¾. Umgangatho wamacandelo ekhabhathi yekhitshi axhomekeke kuhlobo lwezixhobo eziqeshwe kulwakhiwo lwazo. Ukongeza kuloo nto, inkqubo yokuvelisa, imveliso, indlela yokuhlangana kunye nofakelo luchaphazela ngokubonakalayo ukusebenza kwekhabinethi yonke yasekhitshini.
Nazi izinto zekhabinethi ekhitshini:
Isakhelo sobuso beKhabhinethi - Isakhelo sobuso bekhabhinethi siphathelene nayo yonke ingaphambili okanye ubuso bekhabhinethi yekhitshi. Eli candelo linokubonwa kuphela kwisitayile sekhitshi esekhitshini. Eyona njongo iphambili yesakhelo sobuso bekhabhinethi kukubamba ucango endaweni yalo. Izinto ezisetyenzisiweyo zeli candelo ziqhelekile ukuba ngumthi onzima kwaye ububanzi bayo bubungakanani ukusuka kwii-intshi ukuya kwi-1 ½ intshi.
Isakhelo sobuso bekhabhathi senziwe ngamacandelo amabini ngokubanzi: iileyili kunye neziporo. Izitayile ziziqwenga ezime nkqo ezenza isakhelo, ngelixa iileyile zingamalungu athe tye. La malungu angadityaniswa ngezikhonkwane, kodwa ngeendlela zokwakha ezikumgangatho ophezulu, iidowels ziyasetyenziswa.
Iminyango yeKhabhinethi kunye neFreyimu Iingcango zeKhabinethi zizinto ozisebenzisayo ukuvala nokuvula iikhabhathi okanye iindlela zokugcina, ngelixa iidrowa zijongise kubuso beedrowa. Kanye njengesakhelo, ezi zinto zikwenziwe ngomthi oqinileyo kwaye kufuneka zibe nobukhulu ubuncinci bee-intshi. Iingcango zeKhabhinethi kunye neefreyimu zedreyini zikwenziwe ngee rails kunye ne-stiles ezinobunzima bee-intshi ezi-3 ukuya kwii-intshi ezintathu. Ezi ntsimbi kunye nezitayile zenza isakhelo somnyango wekhabinethi esigcina iphaneli yeziko kwindawo yayo. Izinto zepaneli yeziko lekhabhathi kunye noyilo ziyahluka ngokuxhomekeka kwisitayile sekhabhinethi.
Iingcango zeKhabhinethi ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye noyilo. Njengoko kukhankanyiwe kweli nqaku, eminye imizekelo yiphaneli ebuyisiweyo kunye nesitayile somnyango wepaneli. Xa sithetha ngeengcango zekhabinethi yekota, sihlala sisitayile sakhe sepaneli, isitayile somnyango wecathedral, i-arch ephindwe kabini okanye i-arch enye, ismullion kunye ne-aksent, isitayile esi-shaker kunye nepaneli ethe tyaba.
Nangona umthi onzima zizinto eziqhelekileyo kwiminyango yekhabhinethi yasekhitshini, ezinye izinto ezinokukhethwa kwezi zinto zi-MDF okanye i-fiberboard ephakathi okanye iplywood efakwe kwi-veneer okanye i-laminates.
Iibhokisi zeDraw - Iibhokisi zedrowa ziiyunithi zokugcina ezinemilo ebhokisi ezingena kwisakhelo sedrowa. Zihlala zilungiswe ngeeroller kunye ne-glides kwaye zisebenza ngokutyhala okulula kunye nokutsala ukuhambisa okushukumayo.
Ngokwemigangatho yaseMelika yomgangatho, iibhokisi zeedrowa kufuneka zenziwe ngomthi oqinileyo kwaye kufuneka ubuncinci zibe zii-intshi ezi-intshi. Icandelo elisezantsi lebhokisi yedrowa kufuneka lenziwe ngeplywood kwaye kufuneka iqhotyoshelwe ngokuqinileyo emacaleni, ngaphambili nangasemva kwebhokisi yedrowa. Iindlela zokwakha zemveli kunye nobungcali bobugcisa zihlala zisebenzisa amalungu okudibanisa ukwenza ibhokisi yedrowa.
Iibhokisi zeedroli ezingabizi kakhulu zisebenzisa ezinye izinto ezinjengebhodi yamasuntswana, isinyithi, iplastiki okanye iplywood ngamacala. Kwaye endaweni yokusebenzisa amalungu adibeneyo aseta ngokuqinileyo ndawonye, ​​amaqhina okanye amanqwanqwa okurhabaxa asetyenzisiweyo.
Iibhokisi zeedrowa kufuneka zomelele kakhulu kwaye kufuneka zibe nokwakha okuqinileyo. Njengoko idrowa yempahla elula ivulwa ubuncinci amaxesha amathandathu ngemini, oko kuthetha ukuba yenye yezona ndawo zisetyenziswayo kwikhabhathi yekhitshi. Ukongeza kuloo nto, ikwathwele ubunzima obuninzi, ke qiniseka ukuba isixhobo kunye nendlela yokwakha oyisebenzisayo kweli candelo lekhabhathi yekhitshi iqhuba kakuhle.
Izinto zangaphakathi ezigqityiweyo -Izixhobo zeendawo zangaphakathi zeekhabhathi kunye neeshelfu zangaphakathi kufuneka zikwazi ukumelana nokuwohloka kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla, kulula ukuzicoca kunye nokungaxhamli. Imigangatho yangaphakathi egqityiweyo yeekhabhathi zasekhitshini zii-melamine kunye ne-melamine laminates eziziintlobo zepolymer ezisetyenziselwa iiplanga okanye iibhodi zamasuntswana.
Xa ukhetha izinto ezifanelekileyo zekhabinethi yakho yangaphakathi ekhitshini, khetha ezo zinokuhlala ixesha elide ngaphandle kokudyobha, ukuqhekeza okanye ukubhabha. Imibala ekhanyayo ikhethwa ngakumbi kuba ivumela abasebenzisi ukuba babone imixholo yeekhabhathi ngokulula. Izinto ezenziwe ngeplanga azikhuthazwa ukuba zisetyenziselwe ukugqiba ngaphakathi kwiikhabhathi zasekhitshini njengoko zihlala zithatha ukufuma ngokukhawuleza kwaye zibonisa ukunxiba ngokulula. Ayimi kakuhle kwizisombululo ezinamandla zokucoca kwaye inokonakaliswa kukufuma okugqithileyo kunye nokufuma okuhlamba izitya.
Iishelufa -Uqwalaselo oluphambili lweeshelufu zekhabinethi yangaphakathi ekhitshini ngamandla. Ezi shelu zangaphakathi okanye zangaphakathi zibamba ubunzima obuninzi ukusuka ekugcineni izitya zedinala, iimbiza kunye neepani okanye iiglasi. Ngaloo ndlela, kufuneka bakwazi ukuma ubunzima kunye nokugqoka kunye nokukrazula kokusetyenziswa kwansuku zonke. Ubuncinci bobukhulu betheyibhile yeeshelfu zii-intshi ezi-,, kodwa ¾ ii-intshi zikhethwa ngakumbi. Ubunzulu betheyibhile yekhabhathi inokuba igcwele okanye ibe sisiqingatha, kodwa eyokuqala icetyiswa ngakumbi kuba ikuvumela ukuba wandise umthamo wokugcina iikhabhathi zasekhitshini.
Izinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa iishelfu zekhabinethi zibandakanya iplywood kunye neebhodi zamasuntswana. Phakathi kwezi zimbini, i-plywood yomelele kwaye kuncinci ukuba i-sag kuneebhodi zamasuntswana. Iibhodi zamasuntswana zibiza kakhulu, kodwa zinotyekelo lokugoba phantsi kobunzima obunzima kwaye zinokugoba okanye zandiswe xa zibonakaliswe kukufuma.
Ngaphandle kwezinto zekhabinethi kunye nezahlulo, kusekho ezinye izinto ezenza iikhabhathi zekhitshi. Ezi zinto zekhabinethi zisetyenziselwa ukunceda ekusebenzeni kakuhle, ukufikeleleka kunye nokubonelela ngenkqubo yekhabinethi yekhitshi eqhuba ngcono.
Nazi ezinye izinto zekhabinethi eyongeziweyo:
Izixhobo zekhabhinethi - Ukongeza kwiidrowa, amaqhina kunye nokutsala, izixhobo zekhabhinethi zikwaquka neendlela ezisetyenziselwa ukusebenzisa ikhabhathi yekhitshi.
Oku kubandakanya iihenjisi zekhabhinethi yasekhitshini Ukukhupha, ukutyibilika kwiidrowa kunye neeroli, njl. Kukho abavelisi abaliqela ababonelela ngetekhnoloji esondeleyo yokuvala izixhobo zekhabethe ezivumela ukuba kube lula ngakumbi kunye nokusetyenziswa.
Iihenjisi zisetyenziselwa ukubamba ucango nekhabhathi kunye, kwaye kwangaxeshanye, yindlela evumela ukuba uvule kwaye uvale iikhabhathi zasekhitshini. Uhlobo lweehenjisi ezisetyenziselwa ikhabhathi yekhitshi luxhomekeke kwisitayile somnyango kunye nohlobo lwekhabhathi. Inokuvezwa okanye ifihlwe. Iihenjisi ezifihliweyo iihenjisi ezifihlakeleyo kwaye azinakubonwa xa iingcango zekhabhinethi zivaliwe. Iihenjisi ezibonakalisiweyo iihenjisi ezibonakala ngokupheleleyo ngaphandle kwekhabhinethi. Iihenjisi ezifihlakeleyo zisetyenziselwa iingcango ezigqunywe ngaphezulu.
Iihenjisi zeKhabhinethi kufuneka zihlale zikumgangatho ophezulu njengoko iingcango zekhabhinethi zihlala zivulekile kwaye zivaliwe amatyeli amaninzi.
Iidrawlides, iZilayidi kunye neembaleki zisetyenziselwa ukubonelela iidrowa ukuhamba ngokulula nangaphandle kwiibhokisi zazo. Kanye njengehenjisi zekhabinethi, ezi ndlela kufuneka zomelele kakhulu kuba ziphantsi kokusetyenziswa nzima kwemihla ngemihla.
Ngokubanzi, ukutyibilika kwiidrowa kufuneka kwenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, ukuthwala ibhola kunye nenkqubo yokuvala ibhafa. Ezi zihlala zifihliwe kwaye kufuneka zikwazi ukuxhasa ubuncinci i-90 yeepawundi zobunzima, ngelixa ikwazi ukutyibilika, ivule kwaye ivale kakuhle. Enye into ebalulekileyo kwiimvalo ze-drawer kukuba kufuneka bakwazi ukwandisa ngokupheleleyo kwaye banikeze ukufikelela okupheleleyo, ukwenzela ukuba umsebenzisi abone yonke imixholo yeedrowa.
Iitshati ezitsalwayo zingahlelwa zibe zimbini ezizezi, izilayidi zedrowa kunye neembaleki zedrowa. Izilayidi zedrowa zii-hardwares ezilungiswe ecaleni kweyunithi yedrowa kunye nomzimba wesidumbu okanye ibhokisi. Ukunceda ukuphuma nokuhamba kweedrowa, iibheringi zebhola ziyasetyenziswa, zinika ukungangxoli nokusebenza ngokugudileyo. Izilayidi zedrowa zithathwa njengomsebenzi onzima kwaye zinokuxhasa imithwalo enzima. Bangcono xa kuthelekiswa neembaleki zedrowa.
Iimbaleki zeDraw zizinze kumda osezantsi weyunithi yedrowa kunye nomzimba wedrowa okanye ibhokisi. Njengezilayidi zedrowa, iimbaleki zeedrowa zisebenzisa iibheringi zebhola ukulungiselela ukusebenza nokuphuma, kodwa umahluko kukuba ubungakanani beebheringi zincinci, ngaloo ndlela zibonelela ngokuhamba ngokutyibilikayo. Olu hlobo loomatshini lucetyiswa ngakumbi kwiidrowa zokuthwala ukukhanya.
Izixhobo - Izixhobo zeKhabinethi yeKhitshi zibalulekile ngokubhekisele ekufezekiseni amandla akho okugcina, ukubonelela ngokulula kokusebenzisa, ukwandisa ukufikelela kunye nokugcina izinto zilungelelanisiwe. Oku kubandakanya ingobozi yocingo, iitreyi zempahla kunye nokwahlulahlula, iipleyiti zeracks, uSusan olivila, ukukhutshwa kwepryry, abaququzeleli be-spice rack kunye nemigqomo yenkunkuma, ukubala nje ezimbalwa.
Zininzi iindlela onokukhetha kuzo kwintengiso ekuvumela ukuba ucwangcise ngokupheleleyo umxholo ngamnye kwikhabhathi yakho yasekhitshini. Unokufumana iinkcukacha kangangoko ufuna, kuxhomekeke kukhetho lwakho okanye iimfuno. Kodwa ezi zixhobo zibiza ngokungaphezulu kwaye zinokufuna isixa esikhulu kuhlahlo-lwabiwo mali.
Ayisiyiyo kuphela le nto yokusebenza, kodwa ikwa negalelo kubuhle bekhaya lakho lekhabhinethi yangaphakathi. Ewe kunjalo, ukubona iipleyiti zakho, izixhobo kunye nezinye izixhobo zasekhitshini kwiindawo zazo yinto eyonelisayo. Iiracks zewayini kunye nemiboniso yeplate inokusetyenziselwa ukujonga ekhitshini.
Omnye umzekelo wezinto zekhitshi zekhitshi zezi:
• Iirack spice - Ukugcina izithako zakho kwindawo yokubeka iziqholo okanye kwidrowa yeziqholo kugcina yonke into ifikeleleka kwaye kuphucule ukusebenza kokuhamba komsebenzi ekhitshini.
• Izitya neetreyile zokwenza izinto - ukulungiselela izinto zesilivere ezinje ngeepuni, iifolokhwe neemela
Imigqomo yokurisayikilisha - isilayidi ekuvumela ukuba ufihle inkunkuma
• I-susans eyonqenayo- ekuvumela ukuba usebenzise iikona kunye neendawo ezifileyo, ngelixa ufikelela kuyo yonke into oyifunayo ngokujika nje okulula
Izixhobo zombane - izixhobo zombane - izixhobo ezincinane ezifana neethowusha, imixube, imixube kunye nabenzi beekofu, ezilungiselela ukuseta ngokulula xa zifuneka kwaye zinika indlela ekhawulezayo yokucima izixhobo xa zingasetyenziswa
• Tsala iitafile - zinokusetyenziswa njengendawo yokusebenza eyandisiweyo okanye ikhawuntara yokulungiselela kwaye zinokubuyiselwa emva xa zingasetyenziswa
• Qengqa iitreyi zedrowa - zokugcina ezinye izixhobo zasekhitshini kunye nezinto eziyimfuneko ngelixa ugcina izinto zilungelelanisiwe
• Ipatri iyakhutshwa - ukugcina izinto ezomileyo, kwangaxeshanye yandisa indawo yokugcina
• Ukukhupha izitora - kwenza ukuba kube lula ukufikelela kwizinto ezibalulekileyo zasekhitshini ngaphandle kwesidingo sokufikelela kubunzulu obupheleleyo bekhabhinethi
Ukulayita - Ngaphantsi kwesibane sekhabhathi, ngaphezulu kwekhabinethi kunye nokukhanyisa kwikhabhathi yangaphakathi kungongezwa kwiikhabhathi zasekhitshini ukubonelela ngokukhanya okongeziweyo kunye nokukhanyisa umsebenzi kwindawo yakho yasekhitshini. Ukukhanya okwenziwe ngokwasekhaya kukuvumela ukuba uwenze ngcono umsebenzi wakho, ngelixa kwangaxeshanye, kunika ubuhle kunye nokonwabisa indawo.
Kukho iindidi zezibane zekhabhinethi onokukhetha kuzo kwaye ezi zinokongezwa kwiikhabhathi zakho okoko nje unombane wazo. Izibane ze-Strip ziyindlela esebenzayo yokongeza ukukhanya kwekhabethe njengoko kungabizi kodwa kubonelela ngokukhanya okwaneleyo. Izibane zomsebenzi zisenokusetyenziswa phantsi kweekhabhathi ukuba ufuna ukukhanya okwandileyo ngexesha lokulungiselela ukutya. Izibane zangaphakathi zekhabhinethi zongezwa ngaphakathi kwiikhabhathi ngokwazo ukuba ufuna ukufumana umbono ongcono wemixholo. Ukukhanya okuhombisa, kwelinye icala, kubonelela ngendawo ephucukileyo yokudala kwaye kubangele umoya opholileyo kunye nowokumema ikhitshi lakho.
Abanye abathengisi bakwanikezela ngezibane zekhabhathi ezizenzekelayo ezivula kwangoko zakuba zivuliwe iikhabhathi. Ngaphandle koko, izibane zenzwa zingasetyenziswa ukuba awufuni kubanjwa iteknoloji.
Apha ngezantsi sabelana ngeendlela ezahlukeneyo zekhabhinethi ekhitshini ebonisa iindlela ezahlukeneyo zekhabinethi ezikhoyo kuyilo lwangaphakathi.
Igama langoku lihambelana nokwangoku okanye okwangoku, kwaye kwa into enye iya kuyilo. Uhlobo lwangoku lubhekisele kwinto eqhubekayo ngoku. Olu hlobo lweekhabhathi zasekhitshini zithatha emva kwesitayile sangoku, yiyo loo nto zineempawu ezifanayo. (Ndwendwela eli phepha ukuze ubone eyethu iikhabhathi zekhitshi zangoku igalari)
Ebonakaliswa ngumbonakalo obukeka kakuhle kunye ne-aesthetics encinci, iikhabhinethi zesitayela zangoku zineendawo ezilula ezingenanto yokuhlobisa. Ngokungafaniyo nezitayile zekhabinethi yemveli, ayinalo ubumbeko lokuhombisa okanye imikrolo kwaye ithanda imigca ecocekileyo kwaye isebenzise indawo ethe tyaba endaweni yeepaneli eziphakanyisiweyo. Isixhobo sayo sikwindawo entle kwaye esingafakwanga uhombiso.
Uhlobo lwekhabhathi zasekhitshini lwangoku ngokubanzi zinembonakalo entle. Kwaye i-aesthetics yabo ecocekileyo ihlala isenza ukuba iindawo zasekhitshini zibonakale ziphangalele kwaye ziqaqambile. Ezi ndlela zekhabinethi zihlala zenziwe ngezinto zangoku ezifana nesinyithi, iglasi okanye iplastiki. Nangona kunjalo, ukhuni okanye i-veneer yomthi ikwasetyenziselwa ukunciphisa ukubonakala kwayo.
Imibala ethandwayo yesitayile sekhabhathi zekhitshi zibandakanya ukungathathi hlangothi kwaye zihlala zinephalethi ye-monochromatic. Ukufezekisa ukujonga okubukhali, imibala efana nomhlophe, mnyama kunye grey iyasetyenziswa. Imibala eqaqambileyo kunye nesibindi nayo isetyenziswa njengezivakalisi.
Izitayile zekhabinethi zekhitshi zale mihla zibonakaliswa yimigca ye-angular, iifom zejiyometri, imiphezulu egudileyo kunye nokuziqhelanisa okuncinci. Ngokubanzi, le ndlela ilula kwaye inembonakalo ecekeceke, ehlengahlengisiweyo. (Ndwendwela eli phepha ukuze ubone eyethu iikhabhathi zekhitshi zale mihla igalari)
Nangona ijolise kwimigca emide engaphezulu, izitayile zekhabinethi zekhitshi zanamhlanje zisebenzisa iifom kunye nee-engile ezigoso. Ikwabonisa indawo ethe tyaba engenazinkcukacha zincinci zemikrolo, ukubumba okanye iipaneli. Ilula nje, icacile kwaye intle.
Kuyafana nakwiikhabhathi zekhitshi zangoku, isitayile sanamhlanje sisebenzisa izinto ezenziwe ngabantu kunye nezinto zokwenziwa njengeplastikhi, isinyithi, iglasi kunye nekhonkrithi okanye kwezinye iimeko, izinto ezixubekileyo. Iikhabhathi zekhitshi zala maxesha zihlala zihlala zigqityiwe ngee laminates, ii-veneers zokhuni okanye iiphaneli zeglasi ezibandayo. Inkuni ikwasetyenziswa kolu hlobo, kodwa endaweni yokusebenzisa uhlobo olunye, isitayile sekhabhathi zekhitshi lwanamhlanje sidibanisa ukugqitywa okungafaniyo. Iipateni ezibonisa ukutyeba ngokubalaseleyo zixhaphakile kwesi sitayile. Xa kuziwa kumbala, ukhuni lwendalo kunye nemibala ekhaliphileyo yinxalenye yepeyinti. Amagqabantshintshi eBold njengobomvu obunzulu, iorenji, luhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka nawo ongezelelwe ukunika umbala wombala.
Uyilo lwekhabhathi yekhitshi yemveli lubandakanya inani lezitayile ezinembali. Oku kuye kwaduma ngexesha le-18 ukuya kwi-201 leminyaka, kunye nefuthe lesimbo saseMelika nesaseYurophu. (Ndwendwela eli phepha ukuze ubone eyethu iikhabhathi zekhitshi zemveli igalari.)
Iikhabhathi zekhitshi zemveli zibonakaliswa ngezinto zendalo kunye nemithi etyebileyo kugqityiwe kwendalo. Ngaphandle kokuvumela umbala wendalo wokhuni ukuba ubonakale, iithowuni ezithulisiweyo zihlala zisetyenziswa kwesi sitayile sekhabhathi yekhitshi. I-White ikwangumbala ithandwayo kwaye uyathandwa kule ndlela ngesibheno sayo esidala, esingaphelelwa lixesha.(Jonga igalari yethu ye iikhitshi ezineekhabhathi ezimhlophe ukufumana ezinye izimvo.)
Xa kuziwa ebusweni bekhabhinethi, umnyango kunye nezinto, iikhabhathi zasekhitshini zemveli zihlala zibonisa iinkcukacha zokuhombisa ezinje ngobumba besithsaba, ipaneli kunye nemizobo entsonkothileyo.
Iikhabhathi zekhitshi zelizwe ziwela phantsi kwesitayile sekhabhathi yekhitshi yemveli kwaye ibonakaliswe kukuvela okungapheliyo kunye nemvakalelo ebukekayo. Olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi lunika imeko efudumeleyo kunye neyobizo. (Jonga imifanekiso yeentlobo ezininzi ze iikhabhathi zelizwe zasekhitshini kweli phepha)
Izinto zokwenza iikhabhathi zekhitshi zelizwe zihlala zizinzile, zomelele kwaye zihlala ixesha elide, ke oko kwenza ukuba kusetyenziswe iinkuni eziqinileyo njengezinto zokuqala. Imithi yepayini, i-cherry, i-oki, i-maple kunye ne-hickory zezinye zeentlobo zeenkuni ezithandwayo zekhabhathi zelizwe.
Uyilo lwekhabhathi zelizwe lekhitshi zisebenzisa izinto zokubumba kunye neempawu ezinomtsalane. Iingcango zephaneli eziphakanyisiweyo kunye neebadibhodi zibonakalisiwe ukongeza kuloo vibe ifana nekhaya. Olunye ukhetho lomnyango wekhabhathi yobuso bekhabhathi yelizwe ziiglasi kunye nocingo.
Ukutyikitya ukujonga iikhabhathi zekhitshi zelizwe kubandakanya ukhuni lwendalo kwibala okanye ukugqitywa kwepeyinti. Umbala wendalo womthi uvumelekile ukuba uthathe inqanaba eliphakathi kwesi sitayile. Ngaphandle koko, emhlophe, emhlophe emhlophe, e-beige e-creamy kunye nokugqitywa koxinzelelo kukwasetyenziswa rhoqo. Injengokubengezela ikwayenye indlela yokugqibezela njengoko inika ilizwe lakudala ukuziva. Kulabo bafuna umbala omncinci kwiikhabhathi zabo, imibala ethambileyo kunye mellow enje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, mint green, buttery etyheli kunye nezinye i-pastel zisenokuphononongwa ngepeyinti.
Isitayile sasekhitshini seRustic sinxulunyaniswa nayo nayiphi na into yexesha, yendalo, efudumeleyo kunye neqhelekileyo. Iikhabhathi zekhitshi zaseRustic kunye neekhabhathi zelizwe ziyafana kwaye ziwela phantsi kwesimbo sendabuko. Olu hlobo lweekhabhathi zasekhitshini zinemvakalelo yokumema kunye neprojekthi yendalo (Tyelela eli phepha ukuze ubone eyethu iikhabhathi zasekhitshini igalari)
Izinto zendalo yenye yezinto ezisayiniweyo zeekhabhathi zekhitshi. Kanye njengekhitshi yelizwe, iinkuni zisetyenziswa ikakhulu njengezinto eziphambili zekhabhinethi. Iindidi eziqhelekileyo zomthi zibandakanya ipine, i-oki, imephu, itsheri kunye nehickory. Nangona kunjalo, ngesitayile esirustic iikhabhathi zasekhitshini, iikhabhathi zihlala zishiywa zingagqitywanga ukuze zibonise umbala wazo wendalo. Endaweni yamabala acwebezelayo, iikhabhathi zerustic zisenokushiywa zirhabaxa ukuze ziphuculwe kwaye ziphakamise ubunyulu kunye nokunyaniseka komthi. Imibala esetyenziselwa isitayile se-rustic iikhabhathi zasekhitshini zihlala zifudumele, zinzulu kwaye zendalo, ukusukela kwiithoni zomhlaba kunye nee-brown.
Iikhikhini zesitayile sobugcisa zihlala zinxulunyaniswa ngokuthe ngqo nekhabhathi emangazayo. Ukwahlula phantsi kwesitayela sendabuko, isitayela sekhabhinethi yekhitshi yezobugcisa saqala ngekhulu le-19 njengesiphumo soMbutho woBugcisa noBugcisa. (Jonga igalari yethu ye Iikhabhathi zekhitshi lezandla kweli phepha)
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwekhitshi laziwa ngokusebenziseka kwendalo. Olu hlobo lwesitayile sekhabhathi yekhitshi lujolise ekusebenzeni endaweni yokuhombisa. Inika ugxininiso ngakumbi kubugcisa kwaye ibeka ipremiyamu ngokulula. Nangona i-utilitarian kwindalo, isitayela seengcibi saba yinto ebonakalayo ebonakalayo kwaye ibonakalisa izitayela zokuyila kwimbali. Ngumtshato ogqibeleleyo wefom kunye nomsebenzi.
Ngokubanzi, iikhabhathi zesitayile sekhitshi zichazwa yimigaqo emithathu esisiseko, uyilo oluthe tye olunemigca ecocekileyo, ulwakhiwo olukumgangatho ophezulu kunye nokuhonjiswa okuncinci. Ukufezekisa olo hlobo, amanqaku athile ayiliweyo aqeshwe kwikhabhathi yekhitshi. Okokuqala, isitayile sobugcisa iikhabhathi zekhitshi zinemigca ecocekileyo, akukho kuyilwa kwendibano kunye neenkcukacha eziyinyani. Ngokuqhelekileyo ichanekile kwaye isebenza ngakumbi kunokwakhiwa kwekhabinethi enzima kakhulu eneenkcukacha eziqingqiweyo kunye nokuhonjiswa. Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwekhitshi elinobugcisa zihlala zinesikwere, imiphetho ethe nkqo kunye neengcango zepaneli ezithe tyaba, iingcango zepaneli eziphakanyisiweyo okanye iingcango zeglasi ezilungiselelweyo ezilula. Ngamanye amaxesha, iingcango zeglasi ezikhokelwayo ziyasetyenziswa.
Okwesibini, endaweni yokubonisa imihombiso, iikhabhathi zesitayile sekhitshi zibonisa umgangatho wokujoyina. Ezinye izinto zokudibanisa eziboniswe kolu hlobo lwekhabhathi zizinto zokudibanisa, ukubola kunye nokuhlangana kweeton, amalunga emigodi kunye namalungu omzimba. Ii-Dowels zinokusetyenziswa endaweni yezikhonkwane.
Okokugqibela, iikhabhathi zekhitshi lobuchwephesha bezandla zisebenzisa iinkuni eziqinileyo ngemibala etyebileyo. Izinto eziphambili ezisetyenziselwa ubukhulu becala olu hlobo lwekhabhathi zasekhitshini ngumthi oqinileyo. Endaweni yokusebenzisa izinto ezingezizo, ikhitshi lokwenyani lesitayile sisebenzisa iinkuni ezinzima ezifana ne-oki, icherry, imaple, ipine kunye nehickory. Ikota yesarha oki yintandokazi yemveli phakathi kweentlobo ezintlanu zeenkuni. Ikota yesarha Umthi uhlala ugqitywa kwibala elinombala onzulu ukuze kuphuculwe ukutyeba kwawo kunye neepateni zokucoca. Inokushiywa ingapeyintwanga kwaye iyinyani kwimeko yayo yendalo, ivumela ipateni yokugaya kunye ne-aesthetics eyahlukileyo ukuba ime endaweni.
Isitayile sasekhitshini saseTuscan savela emaphandleni e-Itali. Olu hlobo loyilo lwekhitshi lubeka ugxininiso kwizithethe zokupheka, ukufudumeza, ukwamkela kunye nomoya ofudumeleyo ofana nowekhaya. Olu hlobo lwekhitshi luvavanya uvuyo lokupheka kunye nokutya.
Ngokubanzi, iikhabhathi zekhitshi zaseTuscan zivelisa ukuziva kweMeditera. Izinto eziphambili ezisetyenziselwa iikhabhathi zaseTuscan zeKhitshi zikumgangatho ophezulu womthi onzima njengemaple kunye necherry. Ukwenza iprojekhthi yemfudumalo, inzulu, amabala ansundu atyebileyo asetyenziswa njengezinto zokugqiba. Izinyithi ezinje ngobhedu, ubhedu, ubhedu kunye nentsimbi zikwasetyenziswa njengesixhobo sokuxhasa ukhuni lwendalo. Ukubuyela umva kuhlala kugxininiswa kwiithayile ezenziwe ngesandla zase-Italiyane ezineempawu ezifudumeleyo ezinje ngee-browns kunye ne-mustard. Imifuno enzulu kunye nobomvu obomvu zihlala zisetyenziselwa ukongeza umbala webala eliqaqambisa indawo. Ezi zimpawu zicacileyo ngamanye amaxesha zisetyenziswa njengombala wekhabhathi ukukhupha ubomi kunye nokufudumala kuyilo lweTuscan Kitchen.
Uyilo lweekhabhathi zekhitshi zaseTuscan ziphakamise iingcango zephaneli ezineempawu zokuhombisa ezifana nokubumba, ii-cornices kunye neeshelfu. Ngenye indlela, iingcango ezenziwe ngeglasi zisetyenziselwa ukuhambisa uyilo oluhle ngakumbi. Ezinye iikhabhathi ze Uyilo lwekhitshi laseTuscan inqaku lokubonisa iiracks zesidlo sangokuhlwa, izinto zokupheka kunye nezinongo. Iimbiza kunye neepani zikwaboniswa kwaye zixhonywe kwiiracks zentsimbi. Ngokubanzi, eyona njongo iphambili yolu hlobo loyilo lwekhabhathi yekhitshi kukwenza ubushushu, umtsalane, vibe odlamkileyo.
Uhlobo lwasekhitshini lendlu yasefama luvelisa intuthuzelo yelizwe, indalo kunye nomoya oshushu, wokwamkela. Ikwahlala inxulunyaniswa negama elithi rustic ngenxa yendlela ekrwada ngayo, kwindalo yendalo kunye nomtsalane. Ngokubanzi, iikhitshi zesitayile sendlu yefama zijolise kumxholo wasekhaya osezantsi.(Jonga igalari yethu ye Iifama zasekhitshini zasendlwini Apha)
Izinto zendalo zezinye zezinto eziphambili zesitayile sendlu yaseFama, unale nto engqondweni, iikhabhathi zasekhitshini zeFama zenziwe ngomthi onzima onje ngemephu, itsheri, i-oki kunye nepine. I-Pine lukhetho oludumileyo lwee khabhathi zasekhaya zasekhitshini kuba ukubonakala kwalo kunamaqhina ngaphandle kwe rustic vibe.
Ipeyinti isetyenziswa njengokugqibezela okuphambili kwindlu yasefama iikhabhathi zasekhitshini. Ipeyinti emhlophe ngowona mbala uqhelekileyo wekhabhathi yasekhitshini yasekhitshini, kodwa iithayile ezithambileyo, ezithulileyo ezinje ngombala opholileyo, iiblues ezithambileyo, i-beige kunye ne-taupe elula nayo inokusetyenziswa. Ubuso beKhabhinethi buhlala bukhuthazwa ngumbumba onzima kunye neekona. Iingcango zekhabhathi zekadibhodi ezikwibhodi ekwayimisebenzi eyaziwayo yeefama zasekhitshini zasekhitshini zasekhaya ngenxa yomtsalane wazo. Ngenye indlela, iingcango ezifakwe iiplanga kunye ukuvulwa kweeshelfu Zikwasetyenziswa ngokubanzi ukubonisa ukutya okutyibilikayo, iiglasi okanye iingqayi zamasoni.
Iifama zasekhitshini zasekhaya zasekhaya zasefama zihlala zidityaniswa nezinye izinto ze-rustic ezinje ngobunzulu, ububanzi, ubungakanani be porcelain okanye isinki yentsimbi engenasici. Ii-aksenti zeediliya kunye nezinto ezindala ezisefashini zikwaboniswa kwiikhabhathi ukwenza ukuba abantu baziva ngakumbi.
Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu eziqhelekileyo zibonakaliswa sisibheno soshishino kunye nokusebenza. Olu hlobo lwesitayile sekhabhinethi luhlengahlengise ukukhuthazwa kwisitayile saseMelika, kodwa ujongeke ngakumbi. Ukulula kunye noyilo olungqalileyo lweendlela zaseYurophu iikhabhathi zekhitshi zibenza ukuba zilungele ngokufanelekileyo useto lwangoku kunye nolwanamhlanje lwekhitshi.(Jonga igalari yethu ye Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu Apha)
Uphawu lwentengiso lwekhabhathi zasekhitshini zaseYurophu kukuba azinachaphaza. Kwaye kuba abanazo izakhelo, ikhabhathi iyagoba ngaphandle komthungo. Isitayile sekhabhinethi yasekhitshini nayo ayibonisi naziphi na iileyili ezithe tye okanye iitayile ezimileyo. Iitayile zekhitshi zaseYurophu zakhona zinezixhobo ezilula zentsimbi ezinembonakalo entle kunye noyilo oluhlengahlengisiweyo.
Uhlobo lweYurophu iikhabhathi zasekhitshini zikwajolise ekugxileni ekusebenzeni nasekusebenzeni. Kuba iiflethi zaseYurophu zincinci, eyona njongo yoyilo yayikukudala ubungakanani bekhabhathi esebenza ngokugqibeleleyo kwaye yandisa indawo. Uyilo olungenasiseko lweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu ezinikezela ngoncedo olongezelelekileyo malunga nokufikeleleka kunye nokusetyenziswa ngokulula.
Izinto ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zokwahluka njengoko zisusela kwizinto zendalo ezinje ngomthi ukuya kwezinye iindlela zangoku ezinjenge-MDF kunye nebhodi yamasuntswana. Xa kuziwa kugqitywa, izinto ezisetyenziswa rhoqo zii-laminates. IiLaminates ziqhotyoshelwe kwizixhobo ze-substrate ukomeleza ukomelela kunye nokuqina. IiLaminates zibonelela ngombala ongaphezulu kwaye ziza kuyilo olulinganisa ukubonakala kweenkuni zokwenyani. Ikwafumaneka ngokubanzi ngemibala ebhalwe ngqindilili enokusebenza kakuhle ekubethweni kwekhitshi yaseYurophu.
Iikhitshi zesitayile seCottage zaziwa ngokubanzi ngomtsalane wazo, ubumnandi beklasikhi kunye nesibheno esingapheliyo. Nangona isisiqhelo, isitayile sendlu ekhulayo sivelisa imeko engekho sesikweni. Ikwajongwa njenge-eclectic kuba iyayiphambanisa imveli kunye nentsha ngokuthomalalisa izinto zoyilo ezisesikweni ezinamagama akutshanje.
Ukutyikitywa kwesitayile sekhabhathi yekhitshi ekhitshini kujikeleza kwiinkcukacha ze-antique, kodwa kule mihla abayili bavame ukudibanisa ezindala kunye nezintsha ukwenza i-vibe engaqhelekanga kunye nokujonga okutsha. Iinkcukacha ze-antique ezifana nokubunjwa kwesithsaba, i-cornices kunye ne-hardware eneempahla eziqhelekileyo ziimpawu eziqhelekileyo zekhitshi zekhitshi zasekhitshini. Enye into ebalulekileyo kwikhabhathi yesitayile yekhitshi uyilo oluvulekileyo. Iikhabhathi zihlala zingenaminyango yokubonelela ngokufikeleleka ngakumbi kunye nokubonisa i-dinnerware enomtsalane.
Ukhetho lwemveli lwezinto zokwenza iikhabhathi zekhitshi lekhitshi ngumthi. Ezinye iintlobo ezithandwayo zibandakanya imephu, itsheri kunye nehickory. Ipeyinti yeetoni ezimhlophe okanye ezinencasa ikwasetyenziswa ngokubanzi njengezinto zokugqiba iikhitshi zesitayile sendlu. Olunye uhlangothi olungathathi hlangothi njengegrey kunye neetani nazo zizalisekile kule ndlela yekhabhinethi yekhitshi. I-hues ethambileyo kunye ne-pastels nayo yongeza ukubamba komtsalane kwiikhabhathi zekhitshi zasekhitshini. Ukufumana i-eclectic vibe ngakumbi, imibala eyahlukileyo yeekhabhathi zasekhitshini kunye nesiqithi esiphakathi sinokuphononongwa.
Iikhabhathi zasekhitshini zasekhitshini zihlala zihlala zidityanisiwe kunye nokugqitywa okunethezeka njengendawo emhlophe yemarble kunye ne-porcelain tile splashboard.
Isitayile sasekhitshini saseMexico sisikhumbuza ngento efudumeleyo, edlamkileyo kwaye emema. Ngamagama alula, inika ispice ngakumbi kunye nomoya onesibindi, wokuchwayita. Kukwabonakaliswa ngokubanzi kukuziva kukrwada.
Iikhabhathi zasekhitshini zaseMexico ziphakamise iikhabhathi zepaneli nge-millwork elula. Endaweni yokugxila kwiinkcukacha, isitayile sekhabhathi sinika ugxininiso ngakumbi ekudaleni uyilo lwekhabhathi erustic, efudumeleyo kunye nesibindi. Uyilo lweekhabhathi zasekhitshini zaseMexico ezihlala zihlala zibonisa iiyunithi ezivulekileyo ezijongise ukubonisa idaywareware enombala.
Inkcubeko kunye nelifa lemveli laseMexico lisikhumbuza umlinganiswa odlamkileyo kwaye oku kuhlala kubonakala kuyilo lwekhitshi ngokusebenzisa imibala edlamkileyo. Isitayile sekhitshi laseMexico linokhetho olunesibindi ngakumbi malunga nokugqitywa. Ithanda umahluko ngaphezulu kokudibanisa. Iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi zihlala zinikwa inkangeleko yokudakumba zisebenzisa ubuchule bokugqiba ubuxoki. Imibala ebonakalayo efana nobomvu obomvu, imifuno eqaqambileyo kunye ne-turquoise nayo isetyenziswa kakhulu kwizakhelo zekhabhinethi nakwiziphatho.
Izixhobo zekhabhathi ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseMexico zineempawu ezifihlakeleyo zokuphefumlelwa kwaseMexico. Iinkcukacha zejiyometri kunye ne-motifs yamagqabi zinokuqoshwa okanye zibhalwe kwikhabhathi yentsimbi kunye nokuyiphatha okanye kwezinye iimeko zipeyintwe ngesandla kwihardware yekhabethe yentsimbi.
Iikhabhathi zasekhitshini zaseMexico zesitayile zihlala zincediswa ziithayile ezinemibala enemibala kunye nepeyinti. Iimpawu eziphefumlelweyo zaseMexico ezinemibala egqamile kunye neqaqambileyo eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza, tyheli kunye nobomvu. Ezinye izinto zoyilo ezinokusetyenziselwa ukutshatisa iikhabhathi zasekhitshini zaseMexico zizinto ezimhlophe ezigqabhukileyo, imiphezulu yeetafile zegranite kunye nobusi begolide. Iikhabhathi zasekhitshini zaseMexico ezinokusetwa ngokuchasene nodonga olufudumeleyo olunemibala ukuze zivuse ukukhanya okuqaqambileyo, okumnandi kwigumbi. Imigangatho yecotta kunye nomgangatho wamatye endalo zizinto eziqhelekileyo onokuzenza zokuxhasa ukuhonjiswa kwiikhabhathi zasekhitshini zaseMexico.
Isitayela sekhitshi se-retro ngumxube wamashumi eminyaka ezimbo ezindala kwaye zichaphazeleka ziindlela zangaphambili. Eyona nto ibalulekileyo, iikhikhini zesitayile se-retro zifana nokuphoswa kwezinto ngokubanzi okudala ukuziva okungathandekiyo. Ngamanye amaxesha isikhumbuza ngesidlo sangokuhlwa njengombala.
Iikhabhathi zekhitshi zeRetro ngumtshato ogqibeleleyo wobugcisa beklasikhi kunye nevibe yangoku. Ikwagxininisa kulwakhiwo olomeleleyo kunye nokusebenza. Uyilo oludume kakhulu lweekhabhathi zekhitshi ze-Retro ziphakathi kwinkulungwane yanamhlanje. Isitayela sekhabhinethi yekhitshi ibonakaliswe ngumbonakalo obonakalayo, ukulungiswa kwemida, imigca ye-angular kunye neefom zejometri. Uyilo alunamthungo ngakumbi, lucacile kwaye lulula. Kwaye njengale ndlela yanamhlanje, ayisebenzisi ukuhombisa okunje ngeenkcukacha zokuhombisa, ukubumba, ii-cornices okanye imifanekiso eqingqiweyo. Izinto eziphathekayo zinokuba ngumthi oqinileyo, i-laminate okanye i-veneers. Imibala kunye nokugqitywa kwekhabinethi yeetro ekhitshini yeekhabhi zekhulu zibandakanya ukukhanya kumthi ophakathi.
Isitayela semfazwe okanye i-American style yase-1950 nayo enye into ephefumlelweyo kwiikhikhiti eziphefumlelweyo ze-retro. Olu hlobo ngokubanzi luvusa ikamva, indawo yobudala bendawo. Iguqulelwe kuyilo lwekhabhinethi, oku kubandakanya amagophe abalulekileyo kunye nee-engile ezibukhali. Ukugqitywa kweekhabhathi zekhitshi ze-retro zemfazwe kunesibindi ngakumbi ngombala. Iibomvu ezibomvu, iiblues kunye nemifuno yokugqitywa kwe-gloss ephezulu nazo zixhaphake. Isitayela sekhabhinethi yekhitshi sihlala sigxininiswa ngokukhazimulayo, ngaphezu kwezibambo ze-chrome.
Ukuqhubela phambili ukuziva kweediliya, iikhabhathi zekhitshi ze-retro zihlala zincediswa ziingceba zefanitshala, izixhobo zombane kunye nemisebenzi yobugcisa. Ukuphindaphinda kunye neememorabilia kukwabonakaliswa ngokuqhelekileyo njengenxalenye yoyilo.
Uhlobo lwasekhitshini lwelizwe laseFrance lolunye lwezona zinto ziyilo zihonjisiweyo zekhitshi. Iwela phantsi kwesitayile sendabuko, ikhupha njengombono oqinileyo wobuhle, ubucukubhede, ubutyebi kunye nokunethezeka. Ngokubanzi, iikhabhathi zasekhitshini zelizwe laseFrance zibonakaliswa kukugqitywa koxinzelelo, iinkuni ezityebileyo kunye nemibala efudumeleyo.
Uyilo lwekhabhinethi yamakhitshi elizwe laseFrance aquka iinkcukacha ezihonjisiweyo ezinje ngemikrolo yokhuni oluntsonkothileyo, ukubumba okuhombisa kunye neekona. IKhabhinethi ijongene nayo ihlala ineengqameko, iipaneli eziphakanyisiweyo kunye nemiphetho yokuhombisa. Uyilo lomnyango webhedi luhlala lusetyenziswa kwiikhabhathi zekhitshi zelizwe laseFrance ukufezekisa ukuziva okungaqhelekanga. Izinyithi ezixubekileyo ezinje ngobhedu kunye nobhedu nazo zinokufakwa kuyilo lwekhabhathi ukongeza isibheno esihle sobuhle. Ngenye indlela, iingcango zegrille kunye neglasi ekhokelwayo zinokusetyenziselwa ukugcwalisa izinto kwikhabhathi etyebileyo yomthi.
Izinto zendalo ezinje ngomthi zezona zinto ziphambili kwisitayile sekhitshi laseFrance. Ukudala umlingiswa we-rustic, le mithi ihlala ishiywe kwimeko yayo yendalo, engagqitywanga, ibonisa iipateni zazo zokucoca. Kwezinye iimeko, ukugqitywa kokubandezeleka, i-antique okanye i-weathered nayo isetyenziselwa ukudala ixesha elidlulileyo, igama elidala le-vibe. Izityebi, iithowuni ezifudumeleyo kunye nemibala enzulu nayo isetyenziswa kakhulu xa kuthelekiswa nemibala ekhanyayo. Ukuba iikhabhathi zipeyintwe, zihlala zigqityiwe kwiithoni zomhlaba kunye nokhilimu okanye beige. Ukugcwalisa izikimu zombala wekhabhathi zekhitshi yelizwe laseFrance kubandakanya iithowuni ezishushu ezinje ngombala omdaka, bomvu nzulu kunye nostadi.
Iikhabhathi zekhitshi zelizwe laseFrance ngamaplanga nazo ziyahambelana nezinye izinto ezigqityiweyo kunye nezixhobo. Ikhabhinethi yehardware yenziwe ngokwenyani okanye isinyithi esifana nentsimbi, ubhedu kunye nobhedu kwisiphelo se-antique.
Uhlobo lweMishini luqale eMelika ngekhulu lama-20. Le ndlela yaqala ngoyilo lwefanitshala kodwa kamva yahlengahlengiswa kuyilo lwekhabhathi yekhitshi. Isitayile soMsebenzi ikwayinkuthazo ephambili kubuGcisa nobuGcisa bobugcisa isitayile okanye isitayile sekhitshi loMenzi, kodwa ikakhulu sidibanisa iimpembelelo ezivela kwimvelaphi yaseSpain.
Kuyafana noyilo olungqalileyo lwekhabhathi zekhitshi zekhitshi loMenzi, iikhabhathi zekhitshi zohlobo lweMishini zibonakaliswa yimigca elula, ethe tye engenanto yokuhombisa. Iingcango ezixhonyiweyo ziyathandwa ngaphezulu kuyilo olunemizobo enzima kunye neenkcukacha. Olu hlobo lwesitayile sekhitshi lekhitshi lwenziwa ziingcibi ezinesakhono, ngaloo ndlela kuqinisekiswa ukwakha okuqinileyo kunye noyilo oluhlala ixesha elide.
Imithi eqinileyo yendalo yeyona nto iphambili kwiikhabhathi zekhitshi zaseMishini. I-oki okanye i-oak emhlophe yaseMelika zezona ntlobo zidumileyo zisetyenzisiweyo. I-Cherry lolunye ukhetho olomeleleyo kwaye ijongeka intle kuyilo lwesitayile soMishini ngenxa yokuba umbala wabo otyebileyo wendalo ubonakalisiwe ngakumbi. Olu hlobo lweendlela zekhabinethi yasekhitshini zihlala zishiywa zikwimeko yazo yendalo, engagqitywanga. Abaze baphathwe ngepeyinti engacacanga, kodwa banokudyobha ubutyebi bezinto eziphantsi kwayo. Imibala efudumeleyo kunye ne-hues ezinzulu zithandwa imibala yokhuni lwekhabhathi yekhitshi.
Xa kuziwa kwizixhobo zokusebenza, iikhabhathi zesitayile sekhitshi zisebenzisa ukusetyenziswa kunye noyilo olusebenzayo. Ezi zinto zenziwe ngentsimbi eyenziwe ngomnyama, ubhedu kunye nobhedu.
Isitayile sekhitshi ekhitshini yekhabhathi nayo lukhetho olwenziwe ngokwesiko kwaye inokubiza ngaphezulu xa kuthelekiswa nezinye izitayile zoyilo lwekhabhinethi. Kuyabiza kakhulu ngenxa yokusebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye nokuqeshwa kweengcali ezinesakhono ngexesha lokuvelisa.
Ukuhlala unyanisekile kwisitayile seMishini yobuhle, ezi ntlobo zeekhabhathi zincediswa zii-decors ezinje ngezibane zokukhanyisa zeglasi. Uhlobo lweMishini iikhabhathi zasekhitshini zikwadityaniswa nokwakhiwa kwiibhentshi zokugcina okanye kwibhokisi yesidlo sakusasa.
Ikhitshi lotshintsho libonisa ukudibanisa kwezimbo zesiko kunye nezangoku zoyilo ukwenza imbonakalo elungeleleneyo yekhaya lakho. Idibanisa ukulula koyilo lwangoku kunye nobushushu kuyilo lwesintu. Ngokudibanisa iinkcukacha zangaphambili kunye nokuhonjiswa okwangoku, iseto esitsha kunye esihlaziyiweyo senziwe.
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi ekhitshini luxhomekeke kwinkangeleko yanamhlanje. Ebonakaliswe yimigca echaziweyo, iprofayili ehlengahlengisiweyo kunye neengcango ezilungiselelwe iipaneli. Uyilo lwayo lulula kodwa luvumela ukusetyenziswa okuncinci kokuhonjiswa okunje ngomsebenzi wokugaya, ii-cornices kunye nee-corbels. Kodwa ezi nkcukacha zoyilo zigcinwa zithotyelwe endaweni yokuba zintsonkothe ​​kakhulu kwaye zicace gca. Eyona nto intle yokuhonjiswa, kokukhona iba yeyesiko, ke qiniseka ukuba ukhetha iinkcukacha zekhabinethi ezingathathi hlangothi kunye nokuthamba.
Endaweni yokusebenzisa izinto zokwenziwa, iikhabhathi zekhitshi zotshintsho zisebenzisa iinkuni kwipeyinti egqityiweyo. Imibala engathath'icala enjenge-white, beige, brown kunye ne-pastel shades ethambileyo yimibala yekhabhinethi eyaziwayo. Iikhabhathi zekhitshi ezimbini zethoni Ukudityaniswa kombala wokuqala kunye nomhlophe njenge-accent kunokuba yindlela elungileyo yokubandakanya umdla wokubonwayo kunye nokulingana.
Iikhabhathi zasekhitshini zotshintsho zihlala zincediswa ngama-accents amancinci, i-backsplash yeklasikhi kwipateni efanayo kunye neetafile zamatye zendalo. Olu hlobo lwezinto zekhabinethi lukwabandakanywa kwiphalethi ye-monochromatic.
Cosmas 305-030SN Satin Umzimveliso Cabin… Iidola ezingama-29.95 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-3506 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ivenkile kaLil 'Davinci kunye neKhabhinethi yoBugcisa obuKhombisa ... $ 42.99 umthengisi ogqibelele (267) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Izibane ze-Motion Sensor Closet, MOSTON 10… $ 21.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-238 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ipakethe eyi-10 - iCosmas 161-3BAB Imbovane eBrashiweyo… $ 37.95 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-154 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
iintlobo ngeentlobo zefanitshala
ikhitshi elineekhabhathi ezimnyama